နေ့စဉ်သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း နစေ့ဉျသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး – Federal Journal
နေ့စဉ်သတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း နစေ့ဉျသတငျးမြား စုဆောငျးတငျပွခွငျး
(No. 19, April 21, 2020)
၁။ တရုတ်ပြန် မြန်မာ ၂၈၀ဝ ကျော် မိုင်းလားတွင် Quarantine လုပ်မည်
၂။ ရှမ်းနဲ့ ကချင်က စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ COVID-19 ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေ ကြိုးပမ်း
၃။ ရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော် တိုက်ပွဲများဖြစ်
၄။ COVID-19 ကာကွယ်တုန့်ပြန်မှုတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစံနှုန်းများရှိနေကြောင်း KPSN ထောက်ပြ
၅။ ပလက်ဝအတွက် ရိက္ခာဆန် အိတ် ၈၀ဝ ကျော် ရောက်ရှိ
၆။ နမ့်လန်တွင် Mask( နှာခေါင်းစည်း) မတပ်သူများ ထိုင်၊ထ ၃၀ ပြစ်ဒဏ်ပေး
၇။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ၁၄ မြို့နယ်ကို ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်
၈။ လွိုင်လင်မြို့နယ် အတွင်း ဈေးဝယ်ခွင့်ကဒ် အသုံးပြုပြီး ဈေးဝယ်ရတော့မည်
၉။ မူဆယ်သွားမည့်ခရီးသည်များ (၁၀၅)မိုင်တွင် ၂၁ ရက် စောင့်ကြည့်သွားမည်
၁၀။ အွန်လိုင်းလောင်းကစားပြုလုပ်ပြီး တရားမဝင်နေထိုင်သော တရုတ်နိုင်ငံသား ၃၀ ဦးအား ဖမ်းဆီး
၁၁။ သစ်တောဌာန တောမီးရှို့မှုကြောင့် ဒေသခံရွာသူရွာသားများ၏ နှစ်ရှည်ဥယျာဉ်ခြံ ၄ဝနီးပါး မီးလောင်ပျက်စီး
၁၂။ ကေအန်ယူ၏ ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကရင်ပြည်နယ်စိုးရ ကန့်ကွက်
၁၃။ Covid-19 အရေးပေါ်ကာလ မြဝတီမြို့တွင် ည မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်
၁၄။ ဖားကန့် မြေစာပုံပြိုကျမှု လူ ၁၀ ဦးခန့် သေဆုံးနိုင်
၁၅။ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွင်း တိုက်ပွဲတွေရပ်ဖို့ ကုလ ထပ်မံတိုက်တွန်း
၁၆။ အေအေက အရပ်သားများကို တိတ်တဆိတ် ဖမ်းခေါ်၊ စစ်ဘေးရှောင်အရေး ဆောင်ရွက်သူများကိုလည်း ခြိမ်းခြောက် ဟု KACC ထုတ်ပြန်
၁၇။ COVID-19 ထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ရန် ကျောက်ဖြူ မြို့၌ ယာယီဈေးအချို့ဖွင့်လှစ်ပေး
၁၈။ ရခိုင်စစ်ရှောင်များ စားနပ်ရိက္ခာ အရေးပေါ် လိုအပ်နေ
၁၉။ လမိုင်းမြို့လူစုလူဝေးဖြင့် တိုက်ခိုက်မှု ၃၉ ဦးအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ
၂၀။ ကယားပြည်နယ် မှ နေရပ်ပြန် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်း ၊ အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီ Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရန် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ကုမ္ပဏီများထံ အကြောင်းကြား
၂၁။ ရောဂါကူးစက်မှုမဖြစ်ပွားအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လူသားတိုင်းတာဝန်ရှိဟု KNU ပြော
၂၂။ တာချီလိတ်ဆေးရုံ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၀ ကျော် သံသယလူနာ သတ်မှတ်ခံရ
၂၃။ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ တီဘီရောဂါဓာတ်ခွဲခန်းအား COVID- 19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင် ရန် လိုအ ပ်သော ပစ္စည်းစာရင်းအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ တင်ပြထား
၂၄။ ပလက်ဝမြို့ကို ရိက္ခာဆက်ပို့မယ်လို့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် ပြော
၂၅။ သျှမ်းပြည်အတွက် COVID-19 စစ်ဆေးသည့် စက် ၂ လုံး ရောက်ရှိတော့မည်
၂၆။ စစ်တွေကို လေယာဉ် နဲ့ ရောက်လာသူတွေထဲက နှစ်ဦးကို စောင့်ကြည့်နေ
၂၇။ လူနာအမှတ်စဉ် ၈၂ ဖြင့်ဆက်စပ်သော ကချင်ပြည်နယ်မှ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈ ဦးအနက် ၄ ဦး ပိုးမတွေ့
၂၈။ ဖမ်းဆီးထားသည့် ရွာသား ၄၀ ခန့်မှ ၃၃ ဦး တပ်မတော် ပြန်လွှတ်ပေး
၂၉။ ကိုဗစ်ကြောင့် ကရင်ပြည်နယ် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းများ ခက်ခဲလာနိုင်ကြောင်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များဆို
၁။ တရုတ်ပြန် မြန်မာ၂၈၀ဝ ကျော် မိုင်းလားတွင် Quarantine လုပ်မည်
တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လာသည့် မြန်မိာုင်ငံသား ၂၈၀ဝ ကျော်ကို ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း အထူးဒေသ (၄) မိုင်းလားတွင် ၂၁ ရက် ကြာ Quarantine လုပ်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း မိုင်းလား အဖွဲ့ (NDAA) ထံမှ သိရသည်။ “သူတို့ရဲ့နေရပ်လိပ်စာ မှတ်ပုံတင် စာရင်းတွေ ပြုစုပြီးမှ အစိုးရအဖွဲ့ကို အကြောင်းကြားပြီး ၂၁ ရက်စောင့်ကြည့်တဲ့ အခြေအနေ သိပြီးမှပဲ။ သူတို့လက်ခံမလား၊ လက်မခံဘူးလား အစိုးရဘက်က ပြောမယ်ပေါ့။ ကျနော်တို့ကတော့ သူတို့ကို ၂၁ ရက် Quarantine လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်”ဟု NDAA ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးကြည်မြင့်က ဧရာဝတီသို့ ပြောကြားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို တရုတ်အစိုးရက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (COVID-19) အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရန် အကြောင်းပြကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လွှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကချင်ပြည်နယ် နယ်စပ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ်တို့မှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဧပြီလအတွင်း အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ထို့အတူ မိုင်းလားဒေသ၏ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ဝင်လာသူများကို Quarantine မလုပ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နေရပ် ဒေသ အသီးသီးသို့ ပြန်လွှတ်မည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း NDAA ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးကြည်မြင့်ကမူ Quarantine မလုပ်ဘဲ ပြန်လွှတ်မည်ဆိုသည့် သတင်းမှာ မမှန်ကန်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်ခရိုင် လွယ်ဂျယ် တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်မှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာ မည့်သူ ၁၈၀ဝ၀ ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း အထူးဒေသ ၄ ၏ နယ်စပ်ဂိတ်မှ တဆင့် ဝင်ရောက်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၈၁၉ ဦးရှိပြီး ၎င်းတို့ကို မိုင်းလားဒေသ၏ နမ့်ပန်း၊ ဆီလူးနှင့် မိုင်းလားမြို့များရှိ စာသင်ကျောင်းများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း အထူးဒေသ ၄ ကျန်းမာရေးဌာနမှ သိရသည်။ “အများစု ဝင်တာက ဧပြီ ၈ ရက် နေ့နဲ့ ၉ ရက်နေ့ဝင်ကြတာ။ တချို့အဲဒီထက်စော ဝင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ စားဖို့ သောက်ဖို့က လက်ရှိမှာ ဒေသကပဲ အကုန်လုံး ပံ့ပိုးပေးနေတာ။ ကျမတို့ ကျန်းမာရေးဌာနကတော့ တရက်ကို ၂ ကြိမ် အပူချိန်တိုင်း တာတွေလုပ်တယ်။ အပူရှပ်တာတို့ ရာသီဥတုကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်တဲ့သူတွေကို ဆေးကုပေးတာတော့ရှိတယ်”ဟု အထူးဒေသ ၄ ကျန်းမာရေးဌာနမှ တာဝန် ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
NDAA အဖွဲ့ကို ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အမှတ် (၈၁၅) စစ်ဒေသမှ ခွဲထွက်လာသော ဦးစိုင်းလင်းက ဦးဆောင်ကာ အခြား တိုင်းရင်းသားများနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များပူးပေါင်း၍ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန် ၃ဝ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ https://burma.irrawadd y.com/news/2020/04/18/220788.html
တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ အစိုးရက ဆိုပေမယ့် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အဝင်အထွက်ကို အစော ပိုင်း ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုပြီး ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ကစလို့ နယ်စပ်အဝင်အထွက်ကို ယူနန်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တွေ က လုံးဝနီးပါး ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယူနန်ပြည်နယ်ထဲ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကချင်စစ်ရှောင်စခန်း ထဲက IDP ဒုက္ခသည်တွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ကျော်ကစပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ ပြန်လာနေကြတာကြောင့် အထူးသဖြင့် တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ အနီးဆုံး မိုးမောက်၊ မန်စီမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကိုဗစ်ရောဂါ မကူးစက်ရအောင် လုံးဝ အပြင်မထွက်ရ Lockdown အမိန့်မျိုး ထုတ်ထားရတယ်လို့ ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယန်အခြေစိုက် ဝမ်ပေါင်နိမ်းထွဲ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဒေါ်မေရီတွမ်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။
“ပြောရမယ်ဆိုရင် Lockdown လုပ်လိုက်တဲ့ သဘောပေါ့၊ ကျမတို့ ကချင် IDP စခန်းတွေ အားလုံးက တရုတ်နယ်စပ် နဲ့နီးတဲ့ စခန်းတွေပဲ ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အခုက တရုတ်က အကုန်လုံး ပိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ အခုဆို အကုန်ပြန်လာကြ တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ သွားအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ ဒီမှာလည်း သူတို့ကို ၂၁ ရက် စောင့်ကြည့် တဲ့ Quarantine Center လေးတွေမှာ ထားထားတာမျိုး ရှိတယ်ပေါ့။ ပြဿနာက အခုက ၂ ပတ်ထဲမှာ ရောက်နေပြီပေါ့။ အဲလို ဆိုတော့ ခုက ဆန်ဆီဆားတော့ ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခြားဟာတွေက အခက်အခဲရှိတယ်။” အထူးသဖြင့် အစိုးရထိန်းချုပ်မှု အောက်မှာ မရှိတဲ့ IDP စစ်ရှောင်စခန်းတွေဟာ အကူအညီရဖို့ အလှမ်းဝေးနေတာကြောင့် ပိုပြီး စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေတယ်လို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ တာဝန်ခံ ဒေါ်ခွန်ဂျာကလည်း ပြောပါတယ်။
ဝမ်ပေါင်နိမ်းထွဲလို လူသားချင်းစာနာမှု အဖွဲ့တွေက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ WHO အဖွဲ့ရဲ့ ထောက်ပံ့မှုနဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေထဲ ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးတာ၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းတာတွေ သွားလုပ်နေပေမယ့် တရုတ်ပြည် ကနေ ပြန်လာသူတွေကြောင့် စခန်းတွင်း လူပိုများလာတဲ့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ဒေါ်မေရီတွမ်က ပြောပါ တယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ KIO ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ လိုင်ဇာမှာ COVID-19 သံသယလူနာ ၄ ဦးတွေ့ထားပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်မှာ ဆေးစစ်တာမျိုး လုပ်ထားတယ်လို့ ဒေါ်ခွန်ဂျာက ပြောပါတယ်။ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာ တရုတ်စစ်တပ် ဖြန့်ချထားပြီး တင်းကျပ်ထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ဖရဲသီးကားတွေ တရုတ်နယ်စပ်နားထိ သွားနေပေမယ့် လိုင်ဇာ-နမ်ဆိုင်ယမ်ကြား ကွင်းပြင်တခုမှာ ပစ္စည်းတွေပုံထားပြီး တရုတ်ဘက်က ကုန်ကားတွေ လာသယ်သွားတာကလွဲလို့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် အဝင် အထွက်ကို တင်းကျပ်ထားပါတယ်။https://burmese.voanews.com/a/shan-kachin-idp-camp-covid19/5 378386.html
သုံးနှစ်ကြာနီးပါးကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိသော ရှမ်းနီလက်နက်ကိုင်တပ်နှင့် တပ်မတော်တို့ ယမန်နေ့မှစပြီး တိုက်ပွဲများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ချင်းတွင်းမြစ်အထက်ပိုင်း ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင်း ဖြစ်ပွားနေခဲ့သည်ဟု ရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်ဖွဲ့(SNA) က ပြောသည်။ ထိုသို့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ တပ်မတော်ဘက်က SNA လှုပ်ရှားနယ်မြေအတွင်းသို့ ဝင်ရောက် နေရာယူခြင်း ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း SNA ဘက်က ပြောသည်။
SNA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဆေစိုင်းထွန်းက တိုက်ပွဲများသည် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်တွင်းရှိ နမ့်တောကျေးရွာ၏ အရှေ့ မြောက်ဘက် ချောင်းကြီးဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဟုဆိုပြီး ” အဓိက တိုက်ပွဲဖြစ်တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကျော်က တည်းက မြန်မာ့တပ်မတော်က နေပြီးတော့မှ SNA နယ်မြေထဲကို ဝင်ပြီးတော့ နေရာယူထားတာများလာတယ်၊ အဓိက စစ်အင် အားတွေ ချလာတယ်၊ အဲနောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နယ်မြေထဲမှာ မနေ့က စပြီး ထိတွေ့မှုတွေ စဖြစ်တာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
ဟုမ္မလင်းအခြေစိုက် ခလရ ၂၂၂ နှင့် တိုက်ပွဲငယ်များဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက်ကလည်း ထပ်မံဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သူက ပြော သည်။ တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီက SNA အဖွဲ့နှင့် ထိတွေ့မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း အတည်ပြုကာ “ဟုမ္မလင်း နမ့်တောဆိုတာ အရင်တုန်းကတော့ သောင်းကျန်းသူရှိတဲ့ နေရာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ” ဟု ပြော သည်။ တိုက်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့ မထုတ်ပြန်သေးပါ။ တပ်မတော်နှင့် SNA ကြားမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက် အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၅ ရက်က ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ နမ့်စပေါ ကျေးရွာ အနီးမှာ တစ်ကြိမ် ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်။ ဒေသခံတစ်ဦးဖြစ်သူ ဆေဆိုင်မုန်း “ ဒီဒေသ မှာ ဒီလိုမျိုးတွေက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အနေအထား မဟုတ်ဘူးလေ။ အဓိကတော့ အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ အမျိုးသမီးတွေ တော်တော်ထိတ်လန့်နေတယ်” ဟု ပြောသည်။ ရှမ်းနီတပ်ဖွဲ့ (SNA)သည် ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ရှမ်းနီ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ http://www.mizzima burmese.com/article/69085
မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်တုန့်ပြန်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု စံနှုန်းများရှိနေကြောင်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကွန်ယက် – KPSN က ယနေ့ (ဧပြီလ ၁၇ရက်) ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ထောက်ပြပြောဆို ထားသည်။ ပြည်မနေ ပြည်သူများအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါအတွက် အကာအကွယ်များရနေချိန် တိုင်းရင်းသားဒေသရှိ ပြည်သူ များအနေဖြင့် အကူအညီများ မရသည့်အပြင် ဗုံးများဖြင့် အပစ်ခံရမှု၊ အသတ်ခံရမှုနှင့် ဆိုးရွားသော ကျန်း မာရေး အန္တရာယ် များဖြင့် ကြုံတွေ့နေရမည့် အခြေအနေသို့ တွန်းပို့ခံနေရကြောင်း KPSN က ဆိုသည်။
KPSN ၏ပြောခွင့်ရ နော်ဝါးခူရှီးက “အခု လူတိုင်း ဒီကပ်ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ အတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်နေချိန် ကိုယ့်ပြည် သူ တွေအတွက် ကြိုးစားကာကွယ်နေချိန် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒီကပ်ရောဂါ အတူတကွတိုက်ဖျက်မှုနဲ့ ပြည်သူလူထု ကာကွယ်မှုမှာ တန်းတူညီမျှတဲ့အခွင့်အရေး ရဖို့လိုတယ်” ဟု ကေအိုင်စီ သို့ပြောသည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလာမှုကို မြို့ပြနေ ပြည်သူများကို ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးမှုနှင့် အခြေခံလူတန်း စား များအတွက်ပါ စားနပ်ရိက္ခာများ ပံ့ပိုးရရှိနေချိန်တွင် တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌မူ အကူအညီ နှင့် သတင်းအချက်အလက် များကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး စစ်တပ်မှ ပြစ်ဒဏ် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနေသည့်ပုံစံဖြင့် သတ်ဖြတ်မှုများနှင့် ဗုံးကြဲမှုများလုပ် ဆောင်လျက် ရှိ ကြောင်း KPSNက ဆိုသည်။
ထို့အတွက် မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဒုက္ခသည်များနှင့် စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများဆီသို့ ကပ်ရောဂါ အန္တရာယ် မကျ ရောက်သေး သည့်အချိန်တွင် အကူအညီထောက်ပံ့မှု မြှင့်တင်ရေး ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုအပ်နေပြီး ဗြိတိန် အစိုးရ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ ကူညီထောက်ပံ့မှုများတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းမြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် အရေးပေါ်အကူ အညီ ပေးပို့မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် ဘားမားကမ်ပိန်းယူကေအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားသလို ဗြိတိန်အစိုးရအား စာရေးသားပေးပို့တောင်းဆိုမှုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း အလားတူ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ http://kicnews.org/2020/04/covid19%e1%80%80%e1%80%ac %e1%80%80%e1%80%bc%e1%80%9a%e1 %80%b9%e1%80%90%e1%8
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့အတွက် ရိက္ခာ ဆန်အိတ် ၈၃၀ ကို ရေလမ်းအတိုင်း စက်လှေဖြင့် သယ်ယူလာရာ ဧပြီ ၁၉ မွန်းလွဲ ပိုင်းတွင် ဆိုက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဆလိုင်းမျိုးထိုက်က “နေ့လည် ၂ နာရီ ဝန်းကျင်လောက်မှာ ပလက်ဝမြို့ကို ရောက်ပြီလို့သိရတယ်။ ဆန်တွေကို ဖြန့်ဝေနေပြီလို့လည်း သိရတယ်”ဟုပြောသည်။ ဆန်အိတ် ၂၀ ခန့် ရေစိုခဲ့သော်လည်း ချက်ပြုတ်၍ ရနိုင်မည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ကနဦးက အဆိုပါဆန်အိတ်များကို ဆမီးမြို့မှ ပလက်ဝမြို့သို့ ကား ၁၀ စီးဖြင့် သယ်ဆောင်လာရာ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA က ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပြန်လှည့်ခဲ့ရကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကုလားတန်မြစ်ကြောင်းအတိုင်း စက်လှေဖြင့် ပြောင်းလဲ သယ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆန်အပါအဝင် ရိက္ခာများ၊ ဆေးဝါးများ ကနဦးတင်ဆောင်လာပြီး ပြန်လှည့်ရသည့် အဆိုပါကားများမှာ ဧပြီ ၁၉ ညနေတွင် ဆမီးသို့ လုံခြုံဘေးကင်းစွာ ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://www.b nionline.net/mm/news-72317
သျှမ်ပြည် မြောက်ပိုင်း နမ့်လန်မြို့တွင် Mask (နှာခေါင်းစည်း) မတပ်ဆင်ပါက ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။ နမ့်လန်မြို့ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ပြည်သူများ Maske တပ်ဆင်ခြင်းမရှိပါက ထိုင်၊ ထ အခါ ၃၀ ပြုလုပ်ရခြင်း (သို့မဟုတ်)ငွေဒဏ် တယောက် ၁ သောင်းပေးဆောင်ရကြောင်း နမ့်လန်ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရသိရသည်။ “နမ့်လန်မြို့ အဝင်မှာ ဌာနဆိုင်ရာတွေစောင့်တယ်။ Mask မတပ်ရင် ထိုင်၊ထ အခါ ၃၀ လုပ်ရတယ်။ မလုပ်ချင်ရင် ငွေဒဏ် ၁ သောင်းပေးရ တယ်။ ပြီးတော့ Mask ဝေပေးတယ်” ဟု နမ့်လန် ဒေသခံ တဦး ဖြစ်သည့် ကိုနိုင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် COVID-19ကို ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရန် နှင့် လူတိုင်း Mask တပ်ဆင်ပြီး အပြင်ထွက်စေချင်သည့် အတွက် ပညာပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်း ကိုနိုင်က ဆိုသည်။
Mask မတပ်သည်သူများကို ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းသည် ဧပြီ ၁၅ ရက် မှစတင်ကာ ပြစ်ဒဏ်ပေးသည့် စနစ်ကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး၊ စတင်လုပ်ဆောင်သည့် ရက်တွင် Mask တပ်ဆင်သည့် မရှိသလောက်နည်းပါးကြောင်း နမ့်လန်မြို့ ဖြူစင်နှလုံးသား လူမှုကူညီ ရေး အသင်းမှ ကိုရန်နိုင်စိုး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။ ထိုပြစ်ဒဏ်ပေးသည့် စနစ်ကို နမ့်လန်မြို့မှ သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့များ ဦးစီးပြီး ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
“စလုပ်တဲ့ ရက်က တော်တော်များများ မတပ်ကြဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ တပ်လာကြတယ်။ ဒီနည်းက အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်” ဟု ကိုရန်နိုင်စိုးက ဆိုသည်။ လက်ရှိ အချိန်ထိ ထို ပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသေးကြောင်း သိရသည်။ သက်ဆိုင်ရာ များအနေဖြင့် ပြည်သူများကို Mask တပ်ဆင်သည့် ကိစ္စတွင် အသိပညာပေးမှုကို လက်ခံသော် လည်း ပြည်သူများ Mask ဝယ်ယူလွယ်ကူအောင် နည်းလမ်းရှာဖွေပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် လူတိုင်းလက်လှမ်းမီသည့် ဈေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချပေးရန်လည်း နမ့်လန် ပြည်သူများက တောင်းဆိုလိုက်သည်။ https://burmese.shannew s.org/archives/1
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၄ မြို့နယ်တွင် ည ၁၀ နာရီမှ နံနက် ၄ နာရီအထိ ညမထွက်ရ အမိန့်ကို ယနေ့(ဧပြီ ၁၈ ရက်) မှ စတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ ည မထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် မြို့နယ်များမှာ မြစ်ကြီးနား၊ ဝိုင်းမော်၊ တနိုင်း၊ ချီဖွေ၊ မိုးကောင်း၊ မိုးညှင်း၊ ဖားကန့်၊ ဗန်းမော်၊ မန်စီ၊ ရွှေကူ ၊ မိုးမောက်၊ ပူတာအို၊ မချမ်းဘော၊ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်တို့ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ထုတ်ပြန်ရသည့် အဓိကအကြောင်းအရင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကြောင့် နေအိမ်တွင်းနေထိုင်သည့် လူငယ်များ ည အချိန် မတော်ထွက်ကာ သောက်စားမူးယစ်ခြင်း၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ပြည်သူလူထု၏ လုံခြုံရေး အခြေအနေများကြောင့် COVID-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီမှ ဧပြီလ ၁၇ ရက် ကညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ် ကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်က ” ဒီက အတည်ပြုမှာပါ။ ဖားကန့်မှာ ကြော်ငြာနေပြီ။ ပြစ်ဒဏ်က တစ်လ ကနေ ငွေဒဏ်လည်း ရှိပါတယ်။ ဧပြီ ၃၀ ရက်အထိ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အားလုံးမှာ ထုတ်ပြန်ထား ပါတယ်”ဟုပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/169636
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဈေးသုံးရန်အတွက် တအိမ်လျှင် ဈေးဝယ်ယူခွင့်ကဒ် (၁) ကဒ် ထုတ်ပေးကာ ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် COVID-19 ကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး လွိုင်လင်ခရိုင် အတွင်းရှိ လွိုင်လင်မြို့နှင့် ပင်လုံမြို့ မှ မြို့မဈေးများနှင့် ပျံကျဈေးများတွင် ဧပြီ ၁၈ ရက်မှ စတင်ကာ ဈေးဝယ် ထွက်ပါက ဈေးဝယ်ခွင့်ကဒ် ယူဆောင်သွားရမည် ဟု လွိုင်လင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
လူစုလူဝေး မဖြစ်စေရန် အတွက် မြို့မဈေးနှင့် ပျံကျဈေး ၂ နေရာ ခွဲထားကာ မနက် ၅ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂ နာရီထိသာ ဈေးရောင်းချသွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ ဈေးဝယ်သည့်အခါ ကဒ်ပါမှသာ ဈေးဝယ်ခွင့် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းလွင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။ “ကဒ်ထုတ်ပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဈေးကိုသွားပြီးတော့ လူစုလူဝေး ဖြစ် တာကို လျှော့ချဖို့ အဓိကပဲ” ဟု လွိုင်လင်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းလွင် ကပြောသည်။ ဈေးသွားသည့် အခါ စနစ်တကျဖြစ်ရန် နှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် လူစုလူဝေး မဖြစ်အောင်၊ ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ပြလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လွိုင်လင်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နန်းမြထွေး က သျှမ်းသံတော် ဆင့် ကိုပြောသည်။
တစ်အိမ်လျင် ဈေးဝယ်ခွင့် ကဒ် (၁) ကဒ် ဖြင့်သာ ဈေးသွားခြင်းဖြင့် မလိုအပ်ပဲ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်မှုကိုရှောင်ရှား နိုင်မည် ဖြစ်ရာ ၎င်းကာကွယ်ရေးမှာ ထိရောက်မှု များစွာ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ပင်လုံ ဒေသခံ စိုင်းဆု ကပြောသည်။ သက်ဆိုင်ရာ က ထုတ်ပေးသည့် ဈေးဝယ်ခွင့်ကဒ်မပါဘဲ နေအိမ်မှ အကြောင်းမဲ့ထွက် သည်ကို တွေ့ ရှိပါက လိုအပ်သလို အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives /16188
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်လာမည့် ခရီးသည်များကို ဧပြီ ၁၈ ရက်မှ စတင်ကာ မိုင်းယု (၁၀၅)မိုင်တွင် ၂၁ ရက် စောင့် ကြည့်ပြီး မှ မူဆယ်မြို့ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုမည်ဟု မူဆယ်မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ ထို ၂၁ ရက် အတွင်း စောင့်ကြည့်ခံရသူများသည် တရက်လျှင် ၅ ထောင်ကျပ်နှုန်းဖြင့် မိမိစရိတ်ဖြင့် နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
“မူဆယ်ဒေသခံ မဟုတ်တဲ့သူတွေ မူဆယ်လာရင် ၂၁ ရက် Quarantine အဖြစ်နေရမယ်။ ၂၁ ရက်အတွက် စားစရိတ် ကတော့ တယောက်ကို တရက် ၅ ထောင် ကျပ်ပေးရမယ်။ အစိုးရ အနေနဲ့ Quarantine အတွက် ဘတ်ဂျက်မချ ထားပေးဘူး။ အလှူရှင်ရှိရင်တော့ အလှူရှင်ကျွေးပါမယ်” ဟု မူဆယ် မြို့အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းကျော်သိန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။ အဆိုပါ quarantine ထားမည့်နေရာများမှာ မိုင်းယု (၁၀၅)မိုင် အတွင်းရှိ ဘုန်းကြီး ကျောင်း ၂ ကျောင်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်း တကျောင်းတို့တွင် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း စိုင်းကျော်သိန်း က ပြောသည်။ “တခြား ဒေသကလူတွေအနေနဲ့ကတော့ ၂၁ ရက် ဝင်ကို ဝင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် မူဆယ်ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ ကိုဗစ် ဖြစ်တဲ့ နေရာကလာရင်တော့ ၁၀၅ မိုင်မှာ ၂၁ ရက် စောင့်ကြည့်သွားမယ်” ဟု စိုင်းကျော်သိန်း က ထပ်လောင်း ပြောသည်။
မူဆယ်မြို့သို့ လာရောက်သည့်သူများအနေဖြင့် ကော်မတီမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် Quarantine များတွင် နေထိုင်လိုခြင်း မရှိပါက တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ် များတွင် မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် Quarantine ဝင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ရေးသားထားသည်။ Quaratine မဝင်လိုပါက မိမိလာရာလမ်းအတိုင်း လှည့်ပြန်ရမည် ဟု လည်း ဖော်ပြ ထားသည်။ သို့သော် တရုတ်နိုင်ငံကို မှီတင်းပြီး တပိုင်တနိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသည့် မူဆယ် ဒေသခံများ အတွက် စီးပွား ရေး ရိုက်ခတ်မှု ရှိကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16181
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့တွင် အွန်လိုင်းလောင်း ကစားပြုလုပ်ပြီး တရားမဝင်နေထိုင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ သား ၃၀ ဦးအား လောင်းကစားပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆက်စပ် ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ဧပြီလ ၁၇ရက်(ယနေ့) မွန်းလွဲ ၃ နာရီ အချိန်ခန့်က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး သက်လင်းဦး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီ အချိန် ခန့်က ဒု-ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲမှူး စိန်ဒွေး နှင့် မြဝတီမြို့နယ် ဒုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုရဲမှူး စိုးနိုင်ဝင်းတို့ဦးစီးသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ မြဝတီမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ ဝိဝေကရာမလမ်းရှိ ကိုစည်သူ ပိုင်ဆိုင်သည့် EMPEROR ဟိုတယ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသားများ ထားရှိပြီး အွန်လိုင်းလောင်း ကစား ဂိမ်းများပြုလုပ်နေကြောင်း သတင်းအရ ဝင်ရောက်ရှာဖွေမှု တစ်ရပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံသား လင်းရှောင်ချန် (၂ဝ နှစ်) အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံသား ၃၀ ဦးတို့အား အွန်လိုင်း လောင်း ကစားပြုလုပ်ရာ၌ အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများဖြစ်သော Monitor (၃၀)လုံး၊ ကီးဘုတ်(၃၀)ခု၊ Mouse(၁၉)ခု၊ Mouse အောက်ခံပြား (၁၉)ခု၊ မီးပလပ်ခုံ(၃)ခု၊ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးခုံ(၁)ခု၊ TV ပါ ဝါကြိုး(၂၃)ခု၊ WIFI စက်(၅) လုံး၊ M ခဲရောင်ဖုန်း (၂၂)လုံး၊ MI ရွှေရောင်ဖုန်း (၈)လုံး၊ စားပွဲခုံ(၁၅)လုံး ထိုင်ခုံ(၃၀)လုံး အစရှိသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မြဝတီမြို့မရဲစခန်း၏ သတင်းထုတ်ပြန် မှုအရ သိရသည်။
အွန်းလိုင်းလောင်းကစားပြုလုပ်ပြီး တရားမဝင်နေထိုင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသား လင်းရှောင်ချန်း အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံသား ၃၀ ဦး နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများအား လက်ခံထားရှိသည့် မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက် ဝိဝေကာရာမလမ်းရှိ EMPEROR ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဦးစည်သူ(၃၅)နှစ်တို့အား ဥပဒေနှင့်အညီ အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမည်ဟု မြို့မ ရဲစခန်းက သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%a1%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9e1%80%9c% e1%80
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ် ဓနုကျေးရွာရှိ အစိုးရသစ်တောဌာနမှ ဝက်ဝံတောင်သစ်တောကြိုးဝိုင်း ဧရိယာအနီးဝန်း ကျင်တွင် စံပြသစ်တောစိုက်ခင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် သစ်တော ၂ဝဝဧက ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကာ မီးရှို့မှုကြောင့် ဒေသခံများ၏ ဥယျာဉ်ခြံများပါ မီးကူးစက်သွားခဲ့ပြီး နှစ်ရှည် ဥယျာဉ်ခြံ ၄ဝနီးပါး မီးလောင်ပျက်စီးသွား ကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်များအရ သိရသည်။ ဧပြီလ ၁၁ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂နာရီအချိန်ခန့်တွင် သထုံမြို့နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ၀န်ထမ်း များက အဆိုပါတောမီးကို ရှို့ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ဓနုကျေးရွာရှိ ဒေသခံများ၏ ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်က အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း လုပ်ငန်းအဖြစ် စိုက်ပျိုးလာခဲ့သည့် ဒူးရင်း၊ နာနတ်၊ မီးကွတ်၊ ကွမ်းပင်၊ ကွမ်းရွက်နှင့် ရာဘာပင်များမှာ မီးလောင် ပျက်စီးသွား ခဲ့သဖြင့် အချိန်မှီ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ရန် အမြန်ဆုံး ကူညီပေးစေလိုကြောင်း ဓနုကျေးရွာဒေသခံများက ပြောဆို သည်။
ဓနုကျေးရွာသူ နောင်မိတုက “မီးရှို့တာ မလုပ်ဖို့ တစ်ရွာလုံး တားမြစ်ခဲ့ပေမယ့် တားမရခဲ့ဘူး။ ကျမရာဘာခြံ ၅ဧက မီးလောင် ထဲ ပျက်စီးသွားတယ်။ ဒီရာဘာပင်ကနေပဲ ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး မိသားစုစားဝတ်နေရေးတွေ ဖြေရှင်း ပေးနေတာပါ။ အခြားအလုပ်တွေလည်း မလုပ်စားတတ်ဘူး။ စားဝတ်နေရေးအတွက် ကောက်ညင်းထုတ်ရောင်းပြီး အခုဖြေရှင်းနေရတယ်။ အချိန်မှီပြန်စိုက်နိုင်အောင် ကူညီပေးစေချင်တယ်။”ဟု ယမန်နေ့ ဧပြီလ ၁၉ရက်နေ့က ကေ အိုင်စီသို့ ပြောသည်။ “သစ်တော စံပြစိုက်ကွက် လာဖော်ထုတ်တာ KNU ဘက်က အုပ်ချုပ်ရေးရော၊ ရပ်ရွာမှာရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးရော တစ်ယောက်မှ မသိရဘူး။ တားမြစ်စာပို့ပြီးမှ သစ်တောက လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး သိရတယ်။ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီး လုပ် ဆောင်ရမယ့်အချိန်မှာ သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဖုန်းနဲ့ပဲ အသိပေးတယ်။ ရှေ့ဆက်မလုပ်ဖို့ ကျနော်တို့ KNU ဘက်က မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တယ်။ သူတို့မှားသွားတယ်လို့ပဲ ပြောတယ်။”ဟု KNU သထုံမြို့နယ် တရားရေးအထောက်အကူပြု အဖွဲ့ဝင် ဓနုကျေးနယ်အုပ်စုဥက္ကဌ ပဒိုစောသားသားက ဧပြီလ ၁၆ရက်နေ့တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်းက “သစ်တောမီးရှို့တာ တော့ ဟုတ်ပါပြီး။ ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်တယ်။ ပြည်သူတွေထိခိုက်တဲ့အပေါ်မှာ ကျနော်တို့အစိုးရ အဖွဲ့ အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတာပေ့ါဗျား။ ဌာနက တာဝန်ရှိတယ်။ ကျနော်ဝန်ကြီးမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရပြီး ရင် ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှိမယ်ပေါ့ဗျာ။ တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှုဆိုတာကတော့ ရှိရမှာပေါ့လေ။ တောင်သူတွေ နစ်နာ တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က လုပ်နည်းလုပ်ထုံးအဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီး လုပ်ရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မှာ စိစစ်ရ မယ့်အပိုင်းရှိတယ်။ အရေးယူရမယ့် အပိုင်းရှိတာပေါ့နော်။ ကျနော်အားနည်းချက်ရှိရင် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အရေးယူခံပါ့မယ်။ လတ်တလောကတော့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဖို့ရော လူထုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရော စီစဉ်ထားတယ်။”ဟု ဧပြီ ၁၆ရက်နေ့ ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်က အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ဓနုသစ်တောကြိုးဝိုင်း စံပြသစ်တောစိုက်ခင်းနေရာသည် ဓနု ကျေးနယ် ရွာ ဒေသခံအများစုက စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် မှီခိုအားထားနေရသည့် သစ်တောဥယျာဉ်ခြံရှိရာ တောင်တန်း လည်းဖြစ်ပြီး တောမီးရှို့ ခြင်းကြောင့် ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသည့်အပြင် ၎င်းကျေးရွာရှိ ဒေသခံများအတွက် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်လည်း ရှားပါး သွားကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုနေကြသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%9e%e1%80%85% e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%90%e1
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ-၁ တပ်ရင်း ၂ ရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကရင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးက ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ ဧပြီ ၁၇ ရက် နေ့ စွဲ နဲ့ ကေအန်ယူ ဗဟိုနှင့်တပ်မဟာဆက်ဆံရေးရုံးဆီ ပေးပို့တဲ့ ကန့်ကွက်စာမှာ ကေအန်ယူအနေနဲ့ အန်စီအေ သဘောတူ စာချုပ်ပါအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့ နယ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေမှာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွေ မပြု လုပ်ဖို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ပေးဖို့ ပါရှိပါတယ်။
ကေအန်ယူ လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ-၁ တပ်ရင်း ၂ အနေနဲ့ ဧပြီ ၁၅ ရက်နေ့က သထုံမြို့နယ် ထုံးဘိုကြီးကျေးရွာ သိမ်းဆိပ်-ပိန္နဲတော-လေးကေ သွားတဲ့လမ်းမပေါ်မှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြတ်သန်းသွားလာသူတွေကို အပူချိန်တိုင်းတာ၊ လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခရီးသွားပြည်သူတွေကို နေ့စဉ် မနက်က ၅ နာရီကနေ ၂ နာရီ အချိန်ထိသာ သွားခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မလိုအပ်ဘဲ ခရီးသွားလာမှုတွေရှောင်ရှားဖို့၊ တတ်နိုင်သမျှ နေအိမ်တွင်းသာ နေထိုင်ဖို့၊ လူစုလူဝေး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကို မကျင်းပဖို့ အသိပေး အကြောင်းကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအပေါ် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်က လက်မှတ်ထိုးပြီး ကန့်ကွက်လွှာပေးပို့ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းနောင်ရဲ့ ကန့်ကွက်လွှာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေအန်ယူလက်အောက်ခံ တပ်မဟာ ၅ ဌာနချုပ်ကလည်း ဒီကန့်ကွက်လွှာပါ နေရာတွေဟာ တပ်မဟာ ၅ ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာရှိနေကြောင်းနဲ့ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ဆောင်မှုကို ကန့်ကွက်တာဟာ ဒေသခံ ကရင် ကျေးရွာလူထုအပေါ် မမှန်ကန်တဲ့ သဘောထားဖြင့် ရောဂါပိုးကူးစက်စေလိုတဲ့သဘော သက်ရောက်နေကြောင်း ပြန်လည် ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးမင်းနောင်ရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကို အလေးအနက် ပြန်လည်ကန့်ကွက်ကြောင်း ဧပြီ ၁၇ ရက်စွဲနဲ့ ပြန်လည်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/383394
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ည ၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့် အပါအဝင် Covid-19 ရောဂါ အရေးပေါ်ကာလ အများပြည်သူလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက် ၄ ရပ်ကို ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့က ယနေ့ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်စာတွင် မည်သူမဆို လုံလောက် သောအကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲ နေ့စဉ် ည(၁၀)နာရီမှ နံနက်(၄)နာရီ ချိန်အတွင်း နေအိမ်ပြင်ပသို့(လုံးဝ) ထွက်ခွာခြင်း မပြုရန်၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် သွားရောက်နေရသည့် ယာဉ်/လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အကောက်အခွန်ဦးစီးဌာနနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတို့၏ စိစစ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သတ်မှတ်နေရာများ၌ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထို့အပြင် ပြည်သူများအနေဖြင့် နေ့ခင်းဘက်တွင်လည်း မဖြစ်မနေ ပြင်ပသို့သွားလာရန်ကိစ္စရှိပါက အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် (၁)ဦးသာ ထွက်ရန်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask ) မတပ်ဘဲ အိမ်ပြင်သို့ထွက်ခွာခြင်း (လုံးဝ)မပြုလုပ်ရန်နှင့် ဈေးအသီးသီးရှိ ဈေးရောင်းဈေးဝယ် လုပ်သားပြည်သူများအနေဖြင့် နှာခေါင်းစည်းများ တပ်ဆင်ထားပြီး ဈေးရောင်း ဈေးဝယ်ပြုလုပ်ကြရန် အစရှိသည့် အမိန့်ကြေညာချက်ကို ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ စာအမှတ် (၄/၂၀၂၀) ယနေ့ ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
နယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီခရိုင်/မြို့နယ်တွင် ပြည်ပအဝင်အထွက်များပြားခြင်း၊ နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးလုပ် ငန်း များနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှိခြင်းတို့ကြောင့် Covid-19 ရောဂါ ပြန့်ပွားမှု မဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ပြည်သူများ အနေဖြင့် ဧပြီလ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာထပ်မံထုတ်ပြန်မှုမရှိမခြင်း ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များကို နေ့စဉ်လိုက်သွားကြရန်နှင့် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဟု သိရသည်။ ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံဒေသအသီးသီးမှ ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာရွှေ့ ပြောင်းလုပ်သား ၁,၅၀၀ ခန့်ကို စောင့်ကြည့်ရေးစခန်း ၆ ခုတွင် ထားရှိပြီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ နေ့စဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/04/covid19%e1 %80%a1%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%b8%e1%80
ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ယနေ့ မနက် မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့် ရေမဆေးသမား ၁၀ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ယနေ့ နံနက် ၅ နာရီခန့်တွင် အေးမြသာယာရပ်ကွက် ဗလခကျေးရွာအနီး ပိုင်ဖြိုးသီဟ အမည်ရှိ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွင် မြေစာပုံပြိုကျလာပြီး ရေမဆေးသမားများ ၁၀ ဦးခန့် ပါသွားသည် ဟု ဖားကန့်ဒေသခံ ဦးနောင်လတ်က KNG သတင်းဌာနသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
“အခုမြေစာပုံပြိုကျတဲ့ နေရာက အနီးတဝိုက်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေ စွန်ပစ်နေတဲ့ မြေစာပုံကြီးဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ မနက် ၄ နာရီ အချိန်မှာက ရေမဆေးသမားတွေ ကျောက်ဝင်ရှာနေတော့ အဲ့မြေစာပုံက ပြိုကျသွားတာဖြစ်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမှ အလောင်ရှာဖွေရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီး လက်ရှိတွင် သေဆုံးသူတစ်ဦး၏ အလောင်းရှာ ဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သူကဆက်လက်ပြောသည်။ တွေ့ရှိထားသည့် သေဆုံးသူတစ်ဦးမှာ အသက် ၂၂ အရွယ်ခန့်ရှိပြီး လက်ရှိ ဖားကန့် မှော်မော်လယန်တွင်နေထိုင်ပြီး နေရပ်ဇာတိမှာ မိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတောရပ်ကွက်မှ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ လက်ရှိပြိုကျသွားသည့် မြေစာပုံမှာ မြန်မာသူရ၊ ယူနတီနှင့် ပိုင်ဖြိုးသီဟ စသော ကျောက်စိမ်း တူးဖော်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ စုပေါင်းစွန့်ပစ် မြေစာပုံကြီးဖြစ်ပြီး ပေ ၁၅၀ ခန့် နက်တွင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးနောင်လတ် ထံမှ သိရသည်။ https://burmes e.kachinnews.com/2020/04/20/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%
ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်တွေအတွင်း အစိုးရတပ်နဲ့ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA တို့ကြားမှာ အရပ်သားတွေ ထိခိုက်သေကျေနေရ တဲ့အထိ အရှိန်မြင့်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ အဆုံးသတ်ကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Lisa Schlein ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့ကနေ ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကို မခွာညိုက တင်ပြပေး ထား ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေထဲက ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး ပင်လယ် ပြင်မှာ သေဆုံးခဲ့ကြရသလို ရာနဲ့ချီပြီး သောင်တင်နေတဲ့ အဖြစ်တွေနဲ့ ကြုံနေရချိန်မှာပဲ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေလည်း ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေတာပါ။
ပင်လယ်ပြင်မှာ သေဆုံးခဲ့ကြရသူတွေဟာ မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားက တိုက်ပွဲတွေနဲ့ တော့ တိုက်ရိုက် ဆက်နွှယ်နေတာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုတွေဟာ လူ နည်းစုတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ ဖိနှိပ်မှုတွေကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့ လုပ်ရပ်အဖြစ်နဲ့လည်း အကဲခတ်တွေက ရှုမြင်ထား ကြပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ကော်မရှင်နာမင်းကြီးရုံး ပြောခွင့်ရ Rupert Colville ကတော့ လတ်တလော မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြား ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ အတူ ကပ်လျက် ရှိနေတဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာပါ နေထိုင်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ၊ ချင်း၊ မြို၊ ဒိုင်းနက်တို့အပြင် တခြားအရပ်သားတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေ ထိခိုက်နေရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုလို COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဘေး ကျရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ တကမ္ဘာလုံးက တိုက်ပွဲမှန်သမျှ ရပ်ထားပေး ကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုလည်း နှစ်ဖက်စလုံးက မသိကျိုးကျွံ ပြုနေခဲ့ကြကြောင်း Colville က ပြောပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လကစလို့ ရခိုင်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် က မြို့နယ် ၉ ခုမှာ အစိုးရက အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုတွေ ဖြတ်တောက်ထားတာဟာလည်း အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခဲ့ ကြောင်း ပြောခွင့် ရ သူက သတိပေးထားပါတယ်။ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုတွေ ပိတ်ထားတာကို မြန်မာအစိုးရက ချက်ချင်း ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့နဲ့ ပဋိပက္ခဒဏ်ကို ခံစားနေကြရတဲ့ ဒေသတွေမှာ လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့တွေ ပေးနိုင်အောင် ခွင့်ပြုဖို့ လည်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံးက တောင်းဆိုထားပါတယ်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ ပျက်ကွက်မယ် ဆိုရင်တော့ ပဋိပက္ခဖြစ်ရာ ဒေသတွေမှာ အရပ်သားတွေ အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အခြေအနေ ပိုဆိုးလာမှာဖြစ်သလို အင်မတန် ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဟန့်တားရာမှာ အဟန့်အတား ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့လည်း Mr. Colville က သတိပေးထားပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/myanmararmyaafightingi n-rakhine-chin/537857 6.html
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့ပေါ်ရှိ အရပ်သားများကို အေအေ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ညဘက်တွင်တိတ်တဆိတ် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားရန် ကြိုးစားအားထုတ်မှု ရှိခဲ့ကြောင်း ခူမီး ချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရာပေါင်းစပ်ညှနနှိုင်းရေးကောင်စီ(KACC)က ဧပြီ ၁၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ ယင်းအပြင် စစ်ဘေးရှောင်များအရေး ဆောင်ရွက်ပေးသူများကို ခြိမ်းခြောက်မှုများ လည်း ရှိနေကြောင်လည်း ပါဝင်သည်။
KACC မှ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဦစောမြက “အခု ထုတ်ပြန်ချက် ထုတ်ရတာက ခုလက်ရှိ မြေပြင်မှာ ဖြစ်ပွားနေတာကို နှစ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းတွေ သိရှိဖို့၊ အဓိကတော့ တာဝန်ရှိခေါင်းဆောင်တွေ သိရှိစေဖို့နဲ့ အများပြည်သူ သိရှိဖို့ ဖြစ်တယ်”ဟု ပြောသည်။ ပလက်ဝမြို့ မြို့သစ်ရပ်ကွက်နေ ဦးအောင်ပ၊ ဦးလင်းဗန်တို့ကို ဧပြီ ၁၀ ရက်၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာရေးကော်မတီဝင် ဦးမြင့်မောင် ကို ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့များတွင် အေအေက ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် မတရားဖမ်းဆီးထားသူများအား အမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်၊ စစ်ဘေးရှောင်များအရေး စာနာ ထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးခြင်းများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးရန်လည်း လက်နက်ကိုင် နှစ်ဖက်အဖွဲ့ထံ တောင်းဆိုထားသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72294
COVID-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့မဈေးနဲ့ ရပ်ကွက်ပျံကျဈေးအချို့ကို ပိတ်သိမ်းပြီး ယာယီဈေးတွေ ဖွင့်လှစ်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဧပြီ ၁၈ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ကွင်းပြင်တွေမှာ ယာယီ ဈေးတွေဖွင့်လှစ်ပြီး ဆိုင်နေရာအကျယ်အဝန်းသတ်မှတ်ကာ ရောင်းချနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ ကျောက်ဖြူ စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းဝင်က ပြောပါတယ်။
“COVID-19 ရောဂါလည်း ဖြစ်လာတဲ့အတွက် လူနေထူထပ်ပြီးတော့ စုစုဝေးဝေးနဲ့ မဖြစ်စေအောင် တခုရယ်၊ နောက်တခါ လူတွေ ဝယ်တဲ့အခါမှာ ရောဂါအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဈေးဝယ်နိုင်အောင်အတွက် ကျနော်တို့က သက်ဆိုင်ရာကွင်းတွေမှာ တဆိုင်နဲ့တဆိုင် ၆ ပေအကွာ၊ လမ်းဆိုရင် ၈ ပေအကျယ် အကွက်ရိုက်ပြီးတော့ ရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါ တယ်။” ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်မှာ ယာယီဈေးနေရာ ၃ နေရာ သတ်မှတ်ကာ အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သားငါးတွေ ရောင်းချပေးနိုင်ဖို့ အဓိကထားကာလုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ ဦးသန်းဝင်း ဆိုပါတယ်။ http://burmese .dvb.no
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော် UNA/AA တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရ သည့် စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာများ အရေးပေါ် လိုအပ်နေသည်ဟု သိရသည်။ မတ်လကုန်အထိ စာရင်း များအရ ကျောက်တော်၊ ရသေ့တောင်နှင့် မင်းပြားမြို့နယ်တို့တွင် စစ်ရှောင်ဦးရေ ၃၀,ဝ၀ဝ ခန့် တိုးလာပြီး စားနပ်ရိက္ခာ မလုံမ လောက် ဖြစ်နေရသည်ဟု အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံများက ပြောသည်။
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး REC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ထွန်းက “အခုက ရိက္ခာအနေနဲ့ ကတော့ လောလောလတ်လတ် တိုးလာတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဆိုရင် အစိုးရက ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ လူတစ်ဦးကို ၃၀ဝ နှုန်း စားနပ်ရိက္ခာအတွက်ကလည်း မရရှိကြသေးဘူး။ ဒါတွေက ကျောက်တော်၊ မင်းပြားဘက်မှာရှိတယ်။ တော်တော် များများ စခန်းတွေမှာက ICRC (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ)တို့ ၊ WFP (ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် )တို့က ပုံမှန် ဆန်အပါအဝင် ပဲတို့၊ ဆီတို့ထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ အခုကျတော့ Covid လည်း ဖြစ်လာတော့ အစီအစဉ်တွေ ပြောင်းလဲတာတို့ ဖြစ်လာတာပေါ့နော်၊ ဆိုတော့ တချို့ Camp တွေဆို ပုံမှန် ရိက္ခာမရောက်တာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်လာပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ ထို့အပြင် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများက ဒေသတွင်း အလှူရှင်များကို လမ်းခရီးတွင် တားဆီးပိတ်ပင်မှုများ၊ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည့်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ဖြစ်နေရသည်ဟု စစ်ရှောင်များက ပြောသည်။
တိုက်ပွဲများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြား၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ မြေပုံ၊ အမ်း၊ ရသေ့တောင်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ စစ်တွေနှင့် ပေါက်တောမြို့နယ်များမှ ဒေသခံပြည်သူများမှာ စစ်ဘေးလွတ်ရာနေရာများတွင် စစ်ရှောင်နေကြသည်။ စစ်တွေမြို့က လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ကိုခိုင်မျိုးထွန်းကလည်း “အခုဖြစ်စဉ်က ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာမှာ ဖြစ်တာ။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည် တစ်ပြည်လုံးမှာက တခြား ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ မြောက်ဦးရယ်၊ ကျောက်တော်ရယ်၊ မင်းပြားရယ်ပေါ့လေ။ တစ်ချို့ဆို အမ်းတောင်ရှိပါတယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့ လာတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်တွေ တောင်မှ စားဝတ်နေရေးကို အရမ်းကို ရုန်းကန်နေရတယ်” ဟု ပြောသည်။
လက်ရှိစခန်းများရှိ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် မဆင်မပြေမှုပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိသလို ယခုလပိုင်းအတွင်း ထပ်မံတိုး လာသည့် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် နေရာထိုင်ခင်းနှင့် ထောက်ပံ့မှုများ လုံးဝ မရှိနိုင်တော့ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် နီးစပ်ရာ တွင် ကြုံသလို တိမ်းရှောင်နေသူများ အလွန်များပြားလာနေပြီး ယင်းတို့၏ အခက်အခဲမှာလည်း လွန်စွာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်လာ နေသည်ဟု REC က ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေရပ်စွန့်ခွာ စစ်ရှောင်နေရသူ ဦးရေ တစ်သိန်းခွဲကျော်သွားပြီ ဖြစ်ပြီး စစ်ရှောင်စခန်းပြင်ပ စစ်ရှောင်နေရသူများက ပိုများနေသည်ဟု စစ်တမ်းများ ကောက်ခံထားသည့် REC က ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72282
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ လမိုင်းမြို့တွင် အုပ်စုဖွဲ့ကာ ခိုက်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည့် လူငယ် ၃၉ ဦးအား ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၂၆ (ဓါးခုတ်မှု) နှင့် ရန်ပွဲတွင်ပါဝင်ပြီး အားပေးကူညီခဲ့သည့်အတွက် ပုဒ်မ (၁၁၄) ဖြင့် အရေးယူထားကြောင်း ရေးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ရုံးမှ သိရသည်။
Covid-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသည့် ကာလအတွင်း ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့ ညက လမိုင်းမြို့တွင် လူငယ် များ ဆိုင်ကယ် ကိုယ်စီဖြင့် အိမ်များကို ခဲဖြင့်ပေါက်ခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည့် ရုပ်သံဖိုင် တခုလူမူ ကွန်ရက်တွင် ထွက်ပေါ်သဖြင့် ပြည်သူများက အရေးယူမှာလားဆိုသည့်မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ရေးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရဲမှူး သိန်းဇော် က “သမီးရည်းစားလုရင်း ရန်ဖြစ်ကြတာ။ ခု ၃၉ ယောက်ကို စခန်းမှာပဲ ဖမ်းထားတယ်။ ဓါးခုတ်ခံရတဲ့ တယောက်က တရားလိုလုပ်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေနဲ့ အရေးယူထားပါတယ်။ ခုဖမ်းထားတဲ့ အထဲမှာ ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးတွေလည်း ပါတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
Covid-19 ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေး ကာလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက လူစုလူဝေး ဖြစ်စေသော ပွဲတော်အခမ်းအနားစသည့် မပြုလုပ်ရသလို ယခုကဲ့သို့ လူအများစုဖွဲ့ပြီးလည်း သွားလာခြင်း မပြုလုပ်ရပါဆိုသည့် ဒေသန္တရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ထိုအမိန့်ကို ချိုးဖောက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် အရေးယူမည်ဟု ပါရှိပြီး ၎င်းတို့ကို Covid-19 ကာလအတွင်း ဒေသန္တရအမိန့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သဖြင့် အရေးယူရန်ကိစ္စက အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျန်းမာရေး ဌာန၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်ဟု ရဲမှူး သိန်းဇော်က ဆိုသည်။
ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့က လမိုင်းမြို့ရှိ လူငယ်များနှင့် သောင်ပြင်ကျေးရွာ လူငယ်များသည် စကားများရာမှ သောင်ပြင်ကျေးရွာမှ လူငယ်များက လမိုင်းမြို့ကို လိုက်လာခဲ့သဖြင့် လမိုင်းနယ်မြေ ရဲစခန်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူများက ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှုမရှိစေရန်အတွက် တားဆီးခဲ့ပြီး သောင်ပြင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ရေးမြို့နယ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးဝင်း က “လမိုင်းက ကောင်မလေးကိစ္စပေါ့။ ဟိုဘက်ရွာနဲ့ ဒီဘက်ရွာ စကားများကြ တာ။ စကားများတဲ့သူက သူတို့အဖော်တွေကို ခေါ်လာပြီးတော့ လာဝင်ရမ်းတဲ့ပုံစံ” ဟု ပြောသည်။
ရေးမြို့နယ်အတွင်းတွင် ရေးမြို့နယ်အပါအဝင် လမိုင်းမြို့နယ်နှင့် ခေါစာမြို့နယ်ဆိုပြီး မြို့နယ် ၃ ခုရှိသလို ရပ်ကျေး ၄၄ ခုရှိကာ လူဦးရေ ၂ သိန်း ၈ သောင်းခန့်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိရေးမြို့နယ်တွင် Quarantine ဝင်နေသူ ၁၀ဝ ကျော်ခန့်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/19/220800.html
ကယားပြည်နယ် မှနေရပ်ပြန် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်ခြင်းမပြုမီ Community Based Facility Quarantine ဝင်ရောက်ရန် ယနေ့( ဧပြီ ၁၉ ရက်)တွင် ကယားပြည်နယ်အစိုးရရုံးက ကုမ္ပဏီများထံ အကြောင်း ကြားစာပေးပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစာတွင် ပြည်နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများအပါအဝင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြသော ကုမ္ပဏီ အသီးသီး၏ ဝန်ထမ်းများ ၊ အလုပ်သမားများသည် မဟာသင်္ကြန် ကာလအတွင်း နေရပ်အသီးသီးသို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာ ခဲ့ကြပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ရာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှု မရှိရေး အတွက် သတ်မှတ်နေရာများတွင် Community Based Facility Quarantine (၂၁)ရက် ထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ် ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ကြောင့် သတ်မှတ်နေရာများတွင် ၂၁ ရက်ကြာ Community Based Facility Quarantine ထားရှိပြီး ကျန်းမာရေး စောင့် ကြပ်စစ်ဆေးမှု ခံယူရေးအတွက် ခရိုင်၊ မြို့နယ် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံနှင့် ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်းပို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်စေရေး အလေးထားကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန် ကယားပြည်နယ်အစိုးရ၏ အကြောင်းကြားစာတွင်ပါရှိသည်။ https://news-eleven.com/article /169728
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်တွင် KNU -ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး တပ်မဟာ ၁ တာဝန်ရှိသူများမှ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကရင်ပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးက ကန့်ကွက်စာ မပေးပို့သင့်ဘဲ ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လူသားတိုင်းတာဝန်ရှိသည်ဟု KNU က ပြန်လည် တုန့်ပြန် ပြောဆိုခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းနောင်၏ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့ရက်စွဲပါ ကန့်ကွက်စာအရ KNU တပ်မဟာ ၁ တပ်ရင်း (၂) မှ တပ်ရင်းမှူးအဆင့်ရှိသူ စောချစ်သူနှင့် ၎င်းဦးစီးအင်အား ၇ ဦးသည် COVID-19 ရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြတ် သန်းသွားလာသူများကို အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး နယ်မြေအတွင်း အချိန် ကန့်သတ်ခရီးသွားလာစေခြင်းနှင့် လူစုလူဝေးဖြစ်စေနိုင်မှုများကို မပြုလုပ်ကြရန် အသိပေး ရည်ညွှန်းစာအပေါ် NCA အပစ်ရပ် စာချုပ်အတိုင်း နယ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ မပြုလုပ်ရန်နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အား ထိန်း သိမ်းကြပ်မတ်ပေးရန် ဖော်ပြထားသည်။
နယ်လုံ၏ ကန့်ကွက်စာနှင့်ပတ်သက်၍ KNU ဗဟိုမှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး -၂ ပဒိုစောလှထွန်းက “ တစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါလုံခြုံရေးအဆင့်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ရောဂါပိုးမပြန့်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အတူ တကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်အစား အစိုးရက ခုလိုကန့်ကွက်တာတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ ည ၁၁း၁၅ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များတွင် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသူ ၁၁၁ ဦးရှိပြီးဖြစ်သည်။ Covid -19 ရော ဂါကာ ကွယ်ထိန်းချုပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကလည်း လိုက်နာရန် စည်းကမ်းချက်များ အသီးသီးထုတ်ပြန်ထားမှုများလည်းရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e 1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%ac%e1%8 0%82%e1%80%ab%e1%80
သျှမ်းပြည် အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၀ ကျော် တို့ သံသယလူနာ အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယမန်နေ့ တွင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ အမှတ် ၉၆ သည် ခွဲစိတ် အထူးကုဆရာဝန် တဦးဖြစ်ပြီး၊ ထိုသူသည် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ အမှတ် ၄၇ နှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက် အရသိရသည်။ “Case 96 နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သူတွေဆေးရုံမှာ အားလုံးပေါင်း ၂၁ ယောက် ရှိတယ်။ ဆရာဝန် က ၁၀ ယောက်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန် ၂ ယောက်ပဲ လွတ်တယ်။ လူနာကတော့ ဒီနေ့ ကျိုင်းတုံဆေးရုံကို ခေါ်သွားလိုက်ပြီ” ဟု သျှမ်းပြည် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
လက်ရှိမှာ တာချီလိတ် ဆေးရုံအုပ်ကြီးအပါအဝင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၁ ဦး Quarantine ပြုလုပ်ထားသဖြင့် တာချီလိတ် ဆေးရုံ အားဖြည့်ရန် အတွက် မန္တလေး မှ သမားတော်တဦး နှင့် မေ့ဆေးအထူးကု ဆရာဝန် တဦး၊ ကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံ မှ သားဖွားမီးယပ် အထူးကု တဦး လာရောက် အားဖြည့်ထားကြောင်း ဒေါက်တာမျိုးထွန်း ကဆိုသည်။ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးနှင့် ညှိနှိုင်းကာ တပ်မတော်ဆေးဘက်မှ အထူးကု ဆရာဝန် ၂ ဦး၊ လက်ထောက်ဆရာဝန် ၄ ဦး နှင့် သူနာပြု ၆ ဦး လာရောက် အားဖြည့်ပေးကြောင်း ဒေါက်တာမျိုးထွန်း ကဆက်လက်ပြောသည်။
လူနာ အမှတ် ၉၆ သည် ရန်ကုန်ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး တဦးဖြစ်ပြီး၊ သူ၏ အမျိုးသမီးသည့် တာချီလိတ်ဆေးရုံက သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် လူနာ အမှတ် ၉၆ သည် ဧပြီ ၆ ရက် တွင် မိသားစုနှင့် တွေ့ဆုံရန် နှင့် တာချီလိတ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး၊ ဧပြီ ၆ ရက်မှ ၁၀ ရက်ထိ တာချီလိတ် ဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့် အထူးကု ဆရာဝန်များနှင့် အလုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးခဲ့သေးကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.shannews.org/arc hives/16195
၂၃။ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ တီဘီရောဂါဓာတ်ခွဲခန်းအား COVID- 19 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင် ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းစာရင်းအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ တင်ပြထား
မော်လမြိုင်မြို့၊ ဘိုကုန်းရပ်ကွက်၊ သံလွင်ဥယျာဉ်ဇုန် (၅) ရှိ Bio Saving Level –3အဆင့်ရှိ တီဘီရောဂါ ဓာတ်ခွဲခန်းအား COVID- 19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါပိုး စစ်ဆေးနိုင်သည့် ဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် လိုအပ်သော ပစ္စည်းစာရင်းအား ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ တင်ပြထားကြောင်း ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ဓာတ်ခွဲခန်းအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ COVID-19 ကူးစက်ကပ်ရောဂါပိုးအား စစ်ဆေးနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ချင်ကြောင်း၊ လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းစာရင်းကိုပြုစုပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနထံ တင်ပြတောင်းခံထားကြောင်း၊ ပစ္စည်းများ ပေးပို့ မည်ဆိုပါကလည်း အနည်းဆုံး တစ်လခန့် ကြာဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပစ္စည်းများရရှိခဲ့ပါကလည်း ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မည့် ဝန်ထမ်းလို အပ်ချက် အခက်အခဲရှိဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကြည်က ပြောကြားသည်။ “ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ အခုရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ NHL ကဘဲ ရသေးတာလေ။ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ Lab တောင်မရသေးဘူး။ မန္တလေးမှာလည်းလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာက တီဘီရောဂါအတွက် လုပ်ထားတဲ့ Lab ရှိနေတော့ ဒီ Coronavirus စစ်နိုင်အောင် ပစ္စည်းတွေ ထပ်ထည့်ရမယ်ဆိုတာကလည်း စာရင်းတွေ ပြုစုပြီး တင်ပြထားတုန်းရှိပါတယ်။ ဖြစ်လာမယ်။ မဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုတော့ ဘာမှမပြောလိုသေးပါဘူး” ဟု ဒေါက်တာ ထွန်းအောင်ကြည်က ပြောကြားသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး လာရောက်ခဲ့စဉ်က လက်ရှိဓာတ်ခွဲခန်းထဲရှိ ပစ္စည်းများနှင့် COVID- 19 ကူးစက်ရောဂါပိုး စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းစာရင်းပြုစုပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံ ပြန်လည်တင်ပြပေးရန် လမ်းညွန်ကြားသွား သည့်အတွက် ဧပြီလ (၁၆) ရက်က ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လာပြီး မော်လမြိုင်ဆေးရုံအုပ်ကြီး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ အားလုံးအစည်းအဝေးခေါ်ယူကာ ဓါတ်ခွဲခန်းအတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းစာရင်းကို ပြည်ထောင်စု ကို ပြန်တင်ပြထားပါကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းဦးက ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးမှ စောင့်ကြည့်လူနာ (PUI) များ နှင့် Quarantine များ၌ စောင့်ကြည့်ခံ နေသူများ၏ Nasopharyngeal Swab နှင့် Oropharyngeal Swab နမူနာအား ရယူ၍ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနရုံးမှတဆင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းဌာနသို့ နေ့စဉ် ပေးပို့စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ https:// news-eleven.com/article/169843
ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လဆန်းပိုင်းကစလို့ ဆန်ရိက္ခာပြတ်လပ်နေတဲ့ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝမြို့ပေါ်ကို မနေ့က ဆန်အိတ် ၈၀ဝ ကျော် ပထမဆုံး ရောက်ရှိသွားပြီး ဒီပမာဏဟာမြို့ပေါ်က လူဦးရေ တစ်သောင်းကျော်အတွက် တစ်ပတ်စာ ဖူလုံသွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သုံးလစာလောက် ဆန်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး စီစဉ်သွားမယ်လို့ တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရ တာဝန် ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် ဆန်တွေကို ခွဲဝေပေးတဲ့ အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့ ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ပလက်ဝ မြို့နယ်အတွက် သုံးလစာ ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ဆန်အိတ် ၆၀ဝ၀ ခန့် စစ်တွေမြို့မှာ ရှိနေပြီး၊ အလှူရှင်တွေ လှူဒါန်းထားတဲ့ ဆန်အိတ် ၃၃၀ဝ လောက် ဆမီးမြို့မှာ ရှိနေပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ နယ်မြေလုံခြုံရေး အခြေအနေအရ ပလက်ဝမြို့ပေါ်ကို ဆန်အိတ်တွေ လွယ်လင့်တကူ မပို့နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတာပါ။ လတ်တလောမှာ ဆမီးနဲ့ ပလက်ဝမြို့ကြားမှာ တိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီး ကားလမ်းကြောင်း ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဆန်တွေ ဆက်ပို့နိုင်မှာပါ။
တပ်မတော်က လုံခြုံရေးပေးလို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ပို့တဲ့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကား ၁၁ စီးနဲ့ ဆန်အိတ် ၈၅၀ တင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားတစ်စီးကပျက်လို့ ဆန်အိတ် ၅၀ ဆမီးမှာ ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်က လမ်းလုံခြုံရေးရယူပြီး ပို့ဆောင်တာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဆက်လက်ပို့မယ့် အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။ အခုလို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပျံ့နှံ့နေချိန်မှာ တိုက်ပွဲတွေကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ အရပ်ဖက် အဖွဲ့တွေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တိုက်တွန်းတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ https://www.rfa.org/bur mese/news/paletwa-refugees-donate-04202020042055.ht
သျှမ်းပြည်အတွင်း COVID-19 ရောဂါ စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် စက် ၂ လုံး မကြာမီ ရောက်ရှိလာမည် ဟု သျှမ်းပြည် အစိုးရ အဖွဲ့ မှစုံစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ စက် ၂ လုံးကို လှူဒါန်းမည့် အလှူရှင်ရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သျှမ်းပြည်အတွင်းရှိ ဆေးရုံကြီး ၂ ခု ဖြစ်သည့် သျှမ်းမြောက် လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံ နှင့် သျှမ်းတောင် တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် ထားရှိသွားမည် ဟု သျှမ်းပြည်နယ်အစိုးရပြောခွင့်ရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် ကပြောသည်။ “သျှမ်းပြည်နယ်အတွက် သတင်း ကောင်းတစ်ခုကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စမ်းသပ်ရေးစက် ၂ စုံ လှူဒါန်းဖို့ ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ တစ်စုံကို သိန်း ၄၀ဝ၀ ပတ်ဝန်းကျင် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီစက်တွေကို ကျနော်တို့ သျှမ်းပြည်ကို လာရောက်လှူဒါန်းထားပါတယ်။”ဟု ဦးစိုးညွန့်လွင် ကပြောသည်။
ငါးပါးသီလ ဘုရားစာသင်ကျောင်းသားဟောင်းများမှ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအတွက် COVID-19 ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်သည့်စက် ၁ စုံ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပြီး ၊မဟာယန ယူနန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေရေးကော်မတီမှလည်း တောင်ကြီး စဝ်စံထွန်းဆေးရုံ အတွက် အဆိုပါစက်မျိုး ၁ စုံ လှူဒါန်း သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “လှူဒါန်းတဲ့ခါမှာ လက်ခံဖို့ မခံဖို့က ကျနော်တို့က ပြည်ထောင်စု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို လမ်းညွန်မှု ခံယူထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကနေ ခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ၂၂ ရက်နေ့မှာ ယူနန်ကနေ မန္တလေး ကိုရောက်မယ်လို့ ပြောပါတယ်”ဟု ဦးစိုးညွန့်လွင် ကပြောသည်။
“ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေကို ကမ္ဘောဇလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ပို့ကြတယ်။ လေကြောင်းက အခုလ ဆိုရင် ၂၃ ရက်နဲ့ ၂၉ ရက်ပဲ ပြေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ ကိုဗစ် ဓာတ်ခွဲနမူနာတွေ ဘယ်လို ပို့ကြမယ်ဆိုတာတော့ မသိတော့ဘူး” ဟု တာချီလိတ်မြို့ရှိ ကမ္ဘောဇ လေကြောင်းလိုင်း အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တဦးကပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/1620
ရန်ကုန်ကနေ စစ်တွေလေဆိပ်ကို အဲကမ္ဘောဇလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့ မနေ့က ရောက်ရှိလာတဲ့ ခရီးသည် ၆၅ ဦး မှာ နှစ်ဦးကိုသာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ရေးအတွက် သီးသန့်နေထိုင်ဖို့ ပြည်နယ်အစိုးရက ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထား ပါတယ်။ ဒေသခံတချို့ကတော့ နှစ်ဦးတည်းကို စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့ လုံလောက်မှု မရှိဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ အဲကမ္ဘောဇ လေကြောင်းနဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ ၆၅ ဦးမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများပြားတဲ့ ရန်ကုန် အင်းစိန်မြို့နယ်က နှစ်ဦး ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကိုသာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားပြီး ကျန်တဲ့သူတွေကို နေအိမ်မှာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ဖို့ အစိုးရက ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ စစ်တွေမြို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့က ကိုထွန်းလင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
“စစ်တွေရယ်၊ ပုဏ္ဍားကျွန်းရယ်၊ ပေါက်တောရယ် သုံးခု ပုဏ္ဍားကျွန်းကိုတော့ ကားနဲ့ပို့တယ်။ ပေါက်တော မနေ့က တစ်ခါ တည်းပို့တယ်၊ အစိုးရအစီအစဉ် နဲ့ ကားနဲ့ပို့တယ်။ စစ်တွေက အင်းစိန်ကလာတဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကိုတော့ ကွာရန်တင်း ထားတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ ဟုမ်းကွာရန်တင်းထားဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်”ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့ မနေ့က ခရီးသည်တင် လေယာဉ် တစ်စီးနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ တင်ဆောင်လာတဲ့ တပ်မတော် လေယာဉ် နှစ်စီး ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက အဓိက စစ်ဆေးကြတာလို့ စစ်တွေလေဆိပ် တာဝန်ရှိသူ ဦးကျော်စိုးက ပြောပါတယ်။
စစ်တွေမြို့နယ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့က ကိုထွန်းလင်းအောင်က အင်းစိန် က နှစ်ဦးထဲကို ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရုံနဲ့ လုံလောက်မှု မရှိနိုင်ဘူးလို့ ထောက်ပြပါတယ်။ “နှစ်ယောက်တည်းထားတာတော့ ဆေ့ပ်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာလည်း တစ်စီးတည်းအတူတူစီးလာခဲ့ပြီးပြီ တစ်စီးလုံးကို တူတူပဲ ကွာရန်တင်း ထားစေချင်တယ်”စစ်တွေမြို့နယ်မှာ သံသယ လူနာတစ်ဦးရှိပြီး ဆေးစစ်ဖို့ ရန်ကုန်ကို ပေးပို့ထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စောင့်ကြည်လူနာ စုစုပေါင်း ၃၆ ဦး ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ https://www.rfa.org/burmese/news/twopassengersarrivedinsittwequarantine04202 020052 728.html
၂၇။ လူနာအမှတ်စဉ် ၈၂ ဖြင့်ဆက်စပ်သော ကချင်ပြည်နယ်မှ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈ ဦးအနက် ၄ ဦးကို စစ်ဆေးရာ ပိုးမတွေ့
Covid-19 ပိုးတွေ့ရှိ လူနာအမှတ်စဉ် ၈၂ နှင့် ထိစပ်ခဲ့ကြသည့် ကချင်ပြည်နယ်မှ စောင့်ကြည့်ခံထားသူ ၈ဦးအနက် ၄ ဦးအား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ရာ ပိုးမတွေ့ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ လူနာအမှတ် ၈၂ ဖြင့် လေယာဉ် အတူးစီးခဲ့ကြသူများသည် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ၅ ဦး၊ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွင် ၁ဦး၊ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ၂ ဦး စုစုပေါင်း ၈ ဦးအနက် ၄ ဦးအား စစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးမှူး ဒေါက်တာနော်ရှဲယ်တာ ပြောသည်။
“အဲဒီ Case လူနာအမှတ် ၈၂ နဲ့ထိစပ်ခဲ့တာ ၈ ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာ ၄ ယောက်ကိုတော့ စစ်ပြီးပြီ။ သင်္ကြန်ကာလအတွင်း စစ်ဆေးပြီးဖြစ်တယ်။ အားလုံးက Nagative ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ ၄ ယောက်ကိုတော့ သန်ဘက်ခါလောက်ပို့ဖို့ စီစဉ်နေပါ တယ်။” ဟု ကျန်းမာရေးမှူး ဒေါက်တာနော်ရှဲယ်တာ ပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် လက်ရှိ Home Quarantine ၁၉၁၂ ဦး၊ Facility Quarantine ၂၇၆၇ ဦးရှိပြီး Quarantine ထားရှိသူ အားလုံးသည် ၄၆၈၈ ဦးရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမှ သိရသည်။
“ခုလေကြောင်းလိုင်းတွေက ပိတ်ထားတော့ ကျမတို့အနေနဲ့ ဓါတ်ခွဲဖို့ ပို့တဲ့နေရာမှာ အခက်ခဲတော့ရှိတယ်။ အချိန်မှီ ၄၈ နာရီ ရောက်မှ တိကျတဲ့အဖြေကရမှာ။ အဲတော့ ဒီကနေဘယ်ချိန်ထွက်မယ် ဘယ်နေရာမှာအိပ်မယ် ရန်ကုန်ကိုဘယ်ချိန်ရောက်မယ် ဆိုတာကအစ အကုန်လုံးကအချိန်ကိုက်လုပ်ရတာပေါ့။ ကားဆရာကလည်း အိပ်ငိုက်လို့မရဘူး။ အဲမှာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေး
ဝန်ထမ်းက ပါရသေးတယ်။ အအေးလမ်းစနစ်နဲ့ သယ်ရတယ်ဆိုတော့ အအေးလမ်းမပြတ်အောင် ပညာရှိတွေလည်း လိုက်ပေး ရတယ်။”ဟု ကျန်းမာရေးမှူး ဒေါက်တာနော်ရှဲယ်တာ ပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ပြည်တော်ပြန်များကိုထားရှိရန် ပြင်ဆင် ထားသည့် FQ နေရာ စုစုပေါင်း ၃၅၁ အနက် နေရာ ၂၅၂ တွင် သုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://burmes e.kachinnews.com/20 20/04/ 20/%e1%80%9c%e1%80%b0%e180%94%e1%80%ac%
တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးသွားသည့် ရခိုင်းပြည်နယ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်မှ ကျောက်ဆိပ်ရွာသား ၄၀ ခန့် အနက်မှ ၃၃ ဦး ပြန် လွတ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း မိသားစုဝင်များထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာသို့ ဧပြီ ၁၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက တပ်မတော်သားများ ဝင်ရောက်လာကာ ကျေးရွာသားများကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်၌ စုဆောင်းပြီးအပြန်တွင် ဖမ်ဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအထဲမှ တချို့ကို ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကျောက်ဆိပ်ရွာသား ဦးဘရွှေ က “ကျနော့်သား ၂ ယောက် ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ပြန်လွတ်လာပါပြီ၊ ပြန်လွတ်လာတာ အားလုံး ၃၃ ပါ၊ ၅ ယောက်က ပြန် မလွတ်လာသေးဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
အဆိုပါ ပြန်လွတ်လာသူများထဲတွင် ရိုက်နှက်ခံရမှုရှိသည့်အတွက် တချို့ ဒဏ်ရာရရှိမှုရှိကြောင်းလည်း မိသားစုဝင်များက ပြောကြသည်။ ဦးဘရွှေက “မနေ့က မနက် ၇ နာရီလောက်မှာ တပ်က ရွာထဲကို ဝင်ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ကို ပြောစရာတွေ ရှိတယ်ဆိုပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်မှာ စုပါတယ်။ အသက် ၄၀ လူတွေကို တဖက် စုတယ်။ အသက်၂၀ ကျော် ၄၀ ကြား လူတွေ ကို တဖက် စုပါတယ်။ သူတို့ နေ့လယ် ၁ နာရီလောက် ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါ ရွာကလူငယ် ၃၉ ဦးကို ကြိုးတုတ်ပြီး ခေါ်သွားပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျနော့်သား၂ ယောက်လည်း ပါသွားတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော် သတင်းပြန်ကြားရေး အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာသားများကို ဖမ်းဆီးထားသည်မှာ မှန်ကန်ပြီး၊ ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်သည့် မသင်္ကာဖွယ်ရာများ တွေ့ရှိရသည့်အတွက် ဆက်စပ် ဖော်ထုတ်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၃၃ ဦးကို ပြန်မလွှတ်ပေးမီက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီး ကျည်ဆန် ကျရောက်ပေါက်ကွဲသည့် ဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သက် ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) က ဧပြီလ ၁၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် သဘောထား ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာအား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ လက်နက် ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးသွားရခြင်း များအား စိစစ်အရေးယူပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်ရေး ကော်မရှင် အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးအား အလေးအနက် တောင်းဆိုကြောင်း ရေးသား ပါရှိသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/20/2209 32.html
ကရင်ပြည်နယ်တွင် Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် လတ်တလော ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုခန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ခေတ္တပိတ်ထား နေရဆဲဖြစ်သည့်အတွက် ကပ်ရောဂါကာလရှည်ကြာပါက ပြည်နယ်အတွင်း ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်း လုပ်ငန်းများ အခက်အခဲ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် (Covid-19) ကပ်ရောဂါကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်တွေ့ရှိရပြီးနောက် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်ပြီး ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများမှာ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လကုန်မှ စတင်ကာ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် ယခုလို ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများ ပိတ်ထားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု လည်းသိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းက“ဟိုတယ်တော်တော်များများက ဘဏ်မှာ ဘဏ်ချေး ငွေယူထားပြီး လည်ပတ်နေတာပေါ့။ ဘဏ်အတိုးကိုလည်းပေးရတဲ့အကန့်တွေရှိတယ်။ ဧည့်သည်မရှိတော့ ဝင်ငွေမရှိတော့ ဘူး။ ဘဏ်အတိုးနှုန်းက အိတ်စိုက်ပြီးပေးရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ ဒီတစ်လနှစ်လအတွင်းမှာ ဒီအတိုင်းဆက်ပိတ်ရပြီး တိုးတက်မှုမရှိလာရင် ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတွေပြောင်း လုပ်ရမလဲ နည်းနည်းရှုတ်ထွေးမှုတွေရှိလာတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ အတွက်က လုပ်ငန်းရှင်တွေက တောင့်ပြီးပေးထားတယ်။ ဒီထက်ကြာရင်တော့ လုပ်ငန်းရှင်ဘက်က ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး”ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်ရှိသည်ဟု သိရပြီး အများစုမှာ ခေတ္တပိတ်ထားသော်လည်း ဖွင့်လှစ်ထားဆဲဖြစ်သည့် ဟိုတယ်အချို့တွင် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်တည်းခိုမှုမရှိသည့်အတွက် ကာလကြာရှည်မည်ဆိုပါက ဝန်ထမ်းများအတွက်ပါ ခက်ခဲလာနိုင်ကြောင်းလည်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ခရီးသွားဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် များပြားလာမှု ကြောင့် နှစ်စဉ်မတ်လနှင့် ဧပြီလများမှာ ခရီးသွားဧည့်သည် အဝင်အထွက်အများဆုံး လ ဖြစ်သလို ဟိုတယ်လည်ပတ်မှု အကောင်းဆုံးလများ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ http://kicnews.org /2020/04/%e1%80%80%e1%8 0%ad%e 1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80
၁။ တရုတျပွနျ မွနျမာ ၂၈၀ဝ ကြျော မိုငျးလားတှငျ Quarantine လုပျမညျ
၂။ ရှမျးနဲ့ ကခငျြက စဈရှောငျစခနျးတှမှော COVID-19 ကွိုတငျကာကှယျရေး အကူအညီပေးရေးအဖှဲ့တှေ ကွိုးပမျး
၃။ ရှမျးနီအမြိုးသားတပျဖှဲ့နှငျ့ တပျမတျော တိုကျပှဲမြားဖွဈ
၄။ COVID-19 ကာကှယျတုနျ့ပွနျမှုတှငျ ခှဲခွားဆကျဆံမှုစံနှုနျးမြားရှိနကွေောငျး KPSN ထောကျပွ
၅။ ပလကျဝအတှကျ ရိက်ခာဆနျ အိတျ ၈၀ဝ ကြျော ရောကျရှိ
၆။ နမျ့လနျတှငျ Mask( နှာခေါငျးစညျး) မတပျသူမြား ထိုငျ၊ထ ၃၀ ပွဈဒဏျပေး
၇။ ကခငျြပွညျနယျတှငျးရှိ ၁၄ မွို့နယျကို ညမထှကျရ အမိနျ့ထုတျပွနျ
၈။ လှိုငျလငျမွို့နယျ အတှငျး ဈေးဝယျခှငျ့ကဒျ အသုံးပွုပွီး ဈေးဝယျရတော့မညျ
၉။ မူဆယျသှားမညျ့ခရီးသညျမြား (၁၀၅)မိုငျတှငျ ၂၁ ရကျ စောငျ့ကွညျ့သှားမညျ
၁၀။ အှနျလိုငျးလောငျးကစားပွုလုပျပွီး တရားမဝငျနထေိုငျသော တရုတျနိုငျငံသား ၃၀ ဦးအား ဖမျးဆီး
၁၁။ သဈတောဌာန တောမီးရှို့မှုကွောငျ့ ဒသေခံရှာသူရှာသားမြား၏ နှဈရှညျဥယြာဉျခွံ ၄ဝနီးပါး မီးလောငျပကျြစီး
၁၂။ ကအေနျယူ၏ ကိုဗဈကာကှယျထိနျးခြုပျရေး လုပျဆောငျခကျြကို ကရငျပွညျနယျစိုးရ ကနျ့ကှကျ
၁၃။ Covid-19 အရေးပျေါကာလ မွဝတီမွို့တှငျ ည မထှကျရ အမိနျ့ထုတျပွနျ
၁၄။ ဖားကနျ့ မွစောပုံပွိုကမြှု လူ ၁၀ ဦးခနျ့ သဆေုံးနိုငျ
၁၅။ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှငျး တိုကျပှဲတှရေပျဖို့ ကုလ ထပျမံတိုကျတှနျး
၁၆။ အအေကေ အရပျသားမြားကို တိတျတဆိတျ ဖမျးချေါ၊ စဈဘေးရှောငျအရေး ဆောငျရှကျသူမြားကိုလညျး ခွိမျးခွောကျဟု KACC ထုတျပွနျ
၁၇။ COVID-19 ထိနျးခြုပျကာကှယျနိုငျရနျ ကြောကျဖွူ မွို့၌ ယာယီဈေးအခြို့ဖှငျ့လှဈပေး
၁၈။ ရခိုငျစဈရှောငျမြား စားနပျရိက်ခာ အရေးပျေါ လိုအပျနေ
၁၉။ လမိုငျးမွို့လူစုလူဝေးဖွငျ့ တိုကျခိုကျမှု ၃၉ ဦးအား ဖမျးဆီးအရေးယူ
၂၀။ ကယားပွညျနယျ မှ နရေပျပွနျ ကုမ်ပဏီ ဝနျထမျး ၊ အလုပျသမားမြား လုပျငနျးခှငျ ပွနျဝငျရောကျခွငျးမပွုမီ Facility Quarantine ဝငျရောကျရနျ ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့က ကုမ်ပဏီမြားထံ အကွောငျးကွား
၂၁။ ရောဂါကူးစကျမှုမဖွဈပှားအောငျ ကွိုတငျကာကှယျလုပျဆောငျခွငျးသညျ လူသားတိုငျးတာဝနျရှိဟု KNU ပွော
၂၂။ တာခြီလိတျဆေးရုံ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး ၂၀ ကြျော သံသယလူနာ သတျမှတျခံရ
၂၃။ မျောလမွိုငျမွို့ရှိ တီဘီရောဂါဓာတျခှဲခနျးအား COVID- 19 ရောဂါပိုး စဈဆေးနိုငျသညျ့ ဓာတျခှဲခနျးအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျ ရနျ လိုအပျသော ပစ်စညျးစာရငျးအား ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနထံ တငျပွထား
၂၄။ ပလကျဝမွို့ကို ရိက်ခာဆကျပို့မယျလို့ အစိုးရနဲ့ တပျမတျော ပွော
၂၅။ သြှမျးပွညျအတှကျ COVID-19 စဈဆေးသညျ့ စကျ ၂ လုံး ရောကျရှိတော့မညျ
၂၆။ စဈတှကေို လယောဉျ နဲ့ ရောကျလာသူတှထေဲက နှဈဦးကို စောငျ့ကွညျ့နေ
၂၇။ လူနာအမှတျစဉျ ၈၂ ဖွငျ့ဆကျစပျသော ကခငျြပွညျနယျမှ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၈ ဦးအနကျ ၄ ဦး ပိုးမတှေ့
၂၈။ ဖမျးဆီးထားသညျ့ ရှာသား ၄၀ ခနျ့မှ ၃၃ ဦး တပျမတျော ပွနျလှတျပေး
၂၉။ ကိုဗဈကွောငျ့ ကရငျပွညျနယျ ဟိုတယျလုပျငနျးမြား ခကျခဲလာနိုငျကွောငျး ဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားဆို
၁။ တရုတျပွနျ မွနျမာ၂၈၀ဝ ကြျော မိုငျးလားတှငျ Quarantine လုပျမညျ
တရုတျနိုငျငံမှ ပွနျလာသညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၂၈၀ဝ ကြျောကို ရှမျးပွညျနယျ အရှပေို့ငျး အထူးဒသေ (၄) မိုငျးလားတှငျ ၂၁ ရကျ ကွာ Quarantine လုပျရနျ စီစဉျနကွေောငျး မိုငျးလား အဖှဲ့ (NDAA) ထံမှ သိရသညျ။ “သူတို့ရဲ့နရေပျလိပျစာ မှတျပုံတငျ စာရငျးတှေ ပွုစုပွီးမှ အစိုးရအဖှဲ့ကို အကွောငျးကွားပွီး ၂၁ ရကျစောငျ့ကွညျ့တဲ့ အခွအေနေ သိပွီးမှပဲ။ သူတို့လကျခံမလား၊ လကျမခံဘူးလား အစိုးရဘကျက ပွောမယျပေါ့။ ကနြျောတို့ကတော့ သူတို့ကို ၂၁ ရကျ Quarantine လုပျဖို့ စီစဉျနတေယျ”ဟု NDAA ဗဟိုကျောမတီဝငျ ဦးကွညျမွငျ့က ဧရာဝတီသို့ ပွောကွားသညျ။
တရုတျနိုငျငံတှငျ သှားရောကျအလုပျလုပျနသေော မွနျမာနိုငျငံသားမြားကို တရုတျအစိုးရက ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (COVID-19) အန်တရာယျထိနျးခြုပျရနျ အကွောငျးပွကာ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလှတျလိုကျခွငျးဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့သညျ ကခငျြပွညျနယျ နယျစပျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ နယျစပျတို့မှ တဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးသို့ ဧပွီလအတှငျး အလုံးအရငျးနှငျ့ ဝငျရောကျလာခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရ သညျ။ ထို့အတူ မိုငျးလားဒသေ၏ နယျစပျဂိတျမြားမှ ဝငျလာသူမြားကို Quarantine မလုပျဘဲ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးရှိ နရေပျ ဒသေ အသီးသီးသို့ ပွနျလှတျမညျဆိုသညျ့ သတငျးမြား ထှကျပျေါနသေျောလညျး NDAA ဗဟိုကျောမတီဝငျ ဦးကွညျမွငျ့ကမူ Quarantine မလုပျဘဲ ပွနျလှတျမညျဆိုသညျ့ သတငျးမှာ မမှနျကနျဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ ဗနျးမျောခရိုငျ လှယျဂယျြ တရုတျနယျစပျဂိတျမှ တဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှငျးသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျလာ မညျ့သူ ၁၈၀ဝဝ ခနျ့ ရှိသညျဟု ဆိုသညျ။ ရှမျးပွညျနယျ အရှပေို့ငျး အထူးဒသေ ၄ ၏ နယျစပျဂိတျမှ တဆငျ့ ဝငျရောကျလာသော မွနျမာနိုငျငံသား ၂၈၁၉ ဦးရှိပွီး ၎င်းငျးတို့ကို မိုငျးလားဒသေ၏ နမျ့ပနျး၊ ဆီလူးနှငျ့ မိုငျးလားမွို့မြားရှိ စာသငျကြောငျးမြားတှငျ ကနျြးမာရေးစောငျ့ကွညျ့ရနျ စီစဉျနကွေောငျး အထူးဒသေ ၄ ကနျြးမာရေးဌာနမှ သိရသညျ။ “အမြားစု ဝငျတာက ဧပွီ ၈ ရကျ နနေဲ့ ၉ ရကျနဝေ့ငျကွတာ။ တခြို့အဲဒီထကျစော ဝငျတဲ့လူတှရှေိပါတယျ။ စားဖို့ သောကျဖို့က လကျရှိမှာ ဒသေကပဲ အကုနျလုံး ပံ့ပိုးပေးနတော။ ကမြတို့ ကနျြးမာရေးဌာနကတော့ တရကျကို ၂ ကွိမျ အပူခြိနျတိုငျး တာတှလေုပျတယျ။ အပူရှပျတာတို့ ရာသီဥတုကွောငျ့ နမေကောငျးဖွဈတဲ့သူတှကေို ဆေးကုပေးတာတော့ရှိတယျ”ဟု အထူးဒသေ ၄ ကနျြးမာရေးဌာနမှ တာဝနျ ရှိသူတဦးက ပွောသညျ။
NDAA အဖှဲ့ကို ဗမာပွညျ ကှနျမွူနဈပါတီ၏ အမှတျ (၈၁၅) စဈဒသေမှ ခှဲထှကျလာသော ဦးစိုငျးလငျးက ဦးဆောငျကာ အခွား တိုငျးရငျးသားမြားနှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားပူးပေါငျး၍ ၁၉၈၉ ခုနှဈ ဇှနျ ၃ဝ ရကျတှငျ ဖှဲ့စညျး တညျထောငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/18/220788.html
တရုတျနိုငျငံထဲမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကို ထိနျးခြုပျနိုငျပွီလို့ အစိုးရက ဆိုပမေယျ့ တရုတျ-မွနျမာနယျစပျ အဝငျအထှကျကို အစော ပိုငျး ထိနျးခြုပျခဲ့တဲ့ အတိုငျးအတာထကျ ပိုပွီး ဧပွီ ၁ ရကျနကေ့စလို့ နယျစပျအဝငျအထှကျကို ယူနနျပွညျနယျ အာဏာပိုငျတှေ က လုံးဝနီးပါး ပိတျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ယူနနျပွညျနယျထဲ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျနကွေတဲ့ ကခငျြစဈရှောငျစခနျး ထဲက IDP ဒုက်ခသညျတှဟော လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပတျကြျောကစပွီး ဒုက်ခသညျစခနျးတှဆေီ ပွနျလာနကွေတာကွောငျ့ အထူးသဖွငျ့ တရုတျနယျစပျနဲ့ အနီးဆုံး မိုးမောကျ၊ မနျစီမွို့နယျတှမှောရှိတဲ့ စဈဘေးဒုက်ခသညျစခနျးတှမှော ကိုဗဈရောဂါ မကူးစကျရအောငျ လုံးဝ အပွငျမထှကျရ Lockdown အမိနျ့မြိုး ထုတျထားရတယျလို့ ကခငျြပွညျနယျ မိုငျဂြာယနျအခွစေိုကျ ဝမျပေါငျနိမျးထှဲ အကူအညီပေးရေးအဖှဲ့ တာဝနျခံ ဒျေါမရေီတှမျက ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။
“ပွောရမယျဆိုရငျ Lockdown လုပျလိုကျတဲ့ သဘောပေါ့၊ ကမြတို့ ကခငျြ IDP စခနျးတှေ အားလုံးက တရုတျနယျစပျနဲ့ နီးတဲ့ စခနျးတှပေဲ ဖွဈတဲ့အခါကတြော့ အခုက တရုတျက အကုနျလုံး ပိတျလိုကျတဲ့အခါကတြော့ အခုဆို အကုနျပွနျလာကွတယျ။ တရုတျပွညျမှာ သှားအလုပျလုပျတဲ့သူတှေ အလုံးအရငျးနဲ့ ပွနျလာတဲ့အခါကတြော့ ဒီမှာလညျး သူတို့ကို ၂၁ ရကျ စောငျ့ကွညျ့တဲ့ Quarantine Center လေးတှမှော ထားထားတာမြိုး ရှိတယျပေါ့။ ပွဿနာက အခုက ၂ ပတျထဲမှာ ရောကျနပွေီပေါ့။ အဲလို ဆိုတော့ ခုက ဆနျဆီဆားတော့ ရတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အခွားဟာတှကေ အခကျအခဲရှိတယျ။”အထူးသဖွငျ့ အစိုးရထိနျးခြုပျ မှု အောကျမှာ မရှိတဲ့ IDP စဈရှောငျစခနျးတှဟော အကူအညီရဖို့ အလှမျးဝေးနတောကွောငျ့ ပိုပွီး စိုးရိမျစရာ ကောငျးနတေယျလို့ ကခငျြငွိမျးခမျြးရေးကှနျရကျအဖှဲ့ တာဝနျခံ ဒျေါခှနျဂြာကလညျး ပွောပါတယျ။
ဝမျပေါငျနိမျးထှဲလို လူသားခငျြးစာနာမှု အဖှဲ့တှကေ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ WHO အဖှဲ့ရဲ့ ထောကျပံ့မှုနဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှထေဲ ကိုဗဈနဲ့ပတျသကျတဲ့ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အသိပညာပေးတာ၊ ပိုးသတျဆေးဖနျြးတာတှေ သှားလုပျနပေမေယျ့ တရုတျပွညျ ကနေ ပွနျလာသူတှကွေောငျ့ စခနျးတှငျး လူပိုမြားလာတဲ့အတှကျ လိုအပျခကျြတှေ ရှိနတေယျလို့ ဒျေါမရေီတှမျက ပွောပါ တယျ။
လောလောဆယျမှာတော့ KIO ထိနျးခြုပျထားတဲ့ လိုငျဇာမှာ COVID-19 သံသယလူနာ ၄ ဦးတှထေ့ားပွီး တရုတျပွညျဘကျမှာ ဆေးစဈတာမြိုး လုပျထားတယျလို့ ဒျေါခှနျဂြာက ပွောပါတယျ။ တရုတျ-မွနျမာနယျစပျမှာ တရုတျစဈတပျ ဖွနျ့ခထြားပွီး တငျးကပျြထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံဘကျက ဖရဲသီးကားတှေ တရုတျနယျစပျနားထိ သှားနပေမေယျ့ လိုငျဇာ-နမျဆိုငျယမျကွား ကှငျးပွငျတခုမှာ ပစ်စညျးတှပေုံထားပွီး တရုတျဘကျက ကုနျကားတှေ လာသယျသှားတာကလှဲလို့ တရုတျ-မွနျမာနယျစပျ အဝငျ အထှကျကို တငျးကပျြထားပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/shankachinidpcampc ovid19/5378386.html
သုံးနှဈကွာနီးပါးကွာတိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ခွငျးမရှိသော ရှမျးနီလကျနကျကိုငျတပျနှငျ့ တပျမတျောတို့ ယမနျနမှေ့စပွီး တိုကျပှဲမြား စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ခငျြးတှငျးမွဈအထကျပိုငျး ဟုမ်မလငျးမွို့နယျတှငျး ဖွဈပှားနခေဲ့သညျဟု ရှမျးနီအမြိုးသားတပျဖှဲ့(SNA) က ပွောသညျ။ ထိုသို့ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားရခွငျးမှာ တပျမတျောဘကျက SNA လှုပျရှားနယျမွအေတှငျးသို့ ဝငျရောကျ နရောယူခွငျး ကွောငျ့ ဖွဈကွောငျး SNA ဘကျက ပွောသညျ။
SNA ပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျ ဗိုလျမှူးကွီး ဆစေိုငျးထှနျးက တိုကျပှဲမြားသညျ ဟုမ်မလငျးမွို့နယျတှငျးရှိ နမျ့တောကြေးရှာ၏ အရှေ့ မွော ကျဘကျ ခြောငျးကွီးဒသေတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဟုဆိုပွီး “အဓိက တိုကျပှဲဖွဈတာကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ တဈပတျကြျောကတညျး က မွနျမာ့တပျမတျောက နပွေီးတော့မှ SNA နယျမွထေဲကို ဝငျပွီးတော့ နရောယူထားတာမြားလာတယျ၊ အဓိက စဈအငျအား တှေ ခလြာတယျ၊ အဲနောကျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နယျမွထေဲမှာ မနကေ့ စပွီး ထိတှမှေု့တှေ စဖွဈတာပေါ့”ဟု ပွောသညျ။
ဟုမ်မလငျးအခွစေိုကျ ခလရ ၂၂၂ နှငျ့ တိုကျပှဲငယျမြားဖွဈပှားနခေဲ့ပွီး ယနနေံ့နကျကလညျး ထပျမံဖွဈခဲ့သညျဟု သူက ပွော သညျ။ တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေးအဖှဲ့ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ထှနျးထှနျးညီက SNA အဖှဲ့နှငျ့ ထိတှမှေု့ ဖွဈပှားကွောငျး အတညျပွုကာ “ဟုမ်မလငျး နမျ့တောဆိုတာ အရငျတုနျးကတော့ သောငျးကနျြးသူရှိတဲ့ နရောတော့ မဟုတျဘူးဗြ” ဟု ပွော သညျ။ တိုကျပှဲနှငျ့ပတျသကျ၍ အသေးစိတျအခကျြအလကျမြားကိုတော့ မထုတျပွနျသေးပါ။ တပျမတျောနှငျ့ SNA ကွားမှာ ၂၀၁၆ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီ ၁၁ ရကျ အိန်ဒိယနယျစပျတှငျ တဈကွိမျ၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ သွဂုတျ ၅ ရကျက ဟုမ်မလငျးမွို့နယျ၊ နမျ့စပေါ ကြေးရှာ အနီးမှာ တဈကွိမျ ထိတှတေို့ကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့ဖူးသညျ။ ဒသေခံတဈဦးဖွဈသူ ဆဆေိုငျမုနျး “ ဒီဒသေ မှာ ဒီလိုမြိုးတှကေ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတဲ့ အနအေထား မဟုတျဘူးလေ။ အဓိကတော့ အသကျကွီးရှယျအိုတှနေဲ့ ကလေးသူငယျတှေ အမြိုးသမီးတှေ တျောတျောထိတျလနျ့ နတေယျ”ဟု ပွောသညျ။ ရှမျးနီတပျဖှဲ့ (SNA)သညျ ၁၉၈၉ ခုနှဈက စတငျဖှဲ့စညျးခဲ့သော ရှမျးနီ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့ဖွဈသညျ။ http://www.mizzima burmese.com/article/69085
မွနျမာနိုငျငံတှငျ COVID-19 ကပျရောဂါ ကာကှယျတုနျ့ပွနျမှု လုပျငနျးစဉျမြားတှငျ ခှဲခွားဆကျဆံမှု စံနှုနျးမြားရှိနကွေောငျး ကရငျငွိမျးခမျြးရေး အထောကျအကူပွုကှနျယကျ – KPSN က ယနေ့ (ဧပွီလ ၁၇ရကျ) ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ထောကျပွပွောဆို ထားသညျ။ ပွညျမနေ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ ကပျရောဂါအတှကျ အကာအကှယျမြားရနခြေိနျ တိုငျးရငျးသားဒသေရှိ ပွညျသူ မြားအနဖွေငျ့ အကူအညီမြား မရသညျ့အပွငျ ဗုံးမြားဖွငျ့ အပဈခံရမှု၊ အသတျခံရမှုနှငျ့ ဆိုးရှားသော ကနျြး မာရေး အန်တရာယျ မြားဖွငျ့ ကွုံတှနေ့ရေမညျ့ အခွအေနသေို့ တှနျးပို့ခံနရေကွောငျး KPSN က ဆိုသညျ။
KPSN ၏ပွောခှငျ့ရ နျောဝါးခူရှီးက “အခု လူတိုငျး ဒီကပျရောဂါပြောကျကငျးဖို့ အတူတကှပူးပေါငျးတိုကျဖကျြနခြေိနျ ကိုယျ့ပွညျ သူ တှအေတှကျ ကွိုးစားကာကှယျနခြေိနျ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ ဒီကပျရောဂါ အတူတကှတိုကျဖကျြမှုနဲ့ ပွညျသူလူထု ကာကှယျမှုမှာ တနျးတူညီမြှတဲ့အခှငျ့အရေး ရဖို့လိုတယျ”ဟု ကအေိုငျစီ သို့ပွောသညျ။
မွနျမာအစိုးရအနဖွေငျ့ ကပျရောဂါဖွဈပှားလာမှုကို မွို့ပွနေ ပွညျသူမြားကို ကနျြးမာရေး အသိပညာပေးမှုနှငျ့ အခွခေံလူတနျး စား မြားအတှကျပါ စားနပျရိက်ခာမြား ပံ့ပိုးရရှိနခြေိနျတှငျ တိုငျးရငျးသားဒသေမြား၌မူ အကူအညီ နှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ မြားကို ပိတျဆို့ထားပွီး စဈတပျမှ ပွဈဒဏျ ကငျးလှတျခှငျ့ရရှိနသေညျ့ပုံစံဖွငျ့ သတျဖွတျမှုမြားနှငျ့ ဗုံးကွဲမှုမြားလုပျ ဆောငျလကျြ ရှိ ကွောငျး KPSNက ဆိုသညျ။
ထို့အတှကျ မွနျမာပွညျတှငျးရှိ ဒုက်ခသညျမြားနှငျ့ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားဆီသို့ ကပျရောဂါ အန်တရာယျ မကြ ရောကျသေး သညျ့အခြိနျတှငျ အကူအညီထောကျပံ့မှု မွှငျ့တငျရေး ပွငျးပွငျးထနျထနျလိုအပျနပွေီး ဗွိတိနျ အစိုးရ အနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာ ကူညီထောကျပံ့မှုမြားတှငျ ပိုမိုပူးပေါငျးမွှငျ့တငျလုပျဆောငျရနျနှငျ့ အရေးပျေါအကူ အညီ ပေးပို့မှုမြားကို လုပျဆောငျပေးရနျ ဘားမားကမျပိနျးယူကအေဖှဲ့မှ ထုတျပွနျတောငျးဆိုထားသလို ဗွိတိနျအစိုးရအား စာရေးသားပေးပို့တောငျးဆိုမှုလညျးပွုလုပျခဲ့ ကွောငျး အလားတူ ထုတျပွနျထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/covid19%e1%80%80%e1%80 %ac%e1%80%80%e1 %80%bc%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%90%e1%8
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့အတှကျ ရိက်ခာ ဆနျအိတျ ၈၃၀ ကို ရလေမျးအတိုငျး စကျလှဖွေငျ့ သယျယူလာရာ ဧပွီ ၁၉ မှနျးလှဲ ပိုငျးတှငျ ဆိုကျရောကျကွောငျး သိရသညျ။ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဆလိုငျးမြိုးထိုကျက “နလေ့ညျ ၂ နာရီ ဝနျးကငျြလောကျမှာ ပလကျဝမွို့ကို ရောကျပွီလို့သိရတယျ။ ဆနျတှကေို ဖွနျ့ဝနေပွေီလို့လညျး သိရတယျ”ဟုပွောသညျ။ ဆနျအိတျ ၂၀ ခနျ့ ရစေိုခဲ့သျောလညျး ခကျြပွုတျ၍ ရနိုငျမညျဟု သူက ဆကျပွောသညျ။
ကနဦးက အဆိုပါဆနျအိတျမြားကို ဆမီးမွို့မှ ပလကျဝမွို့သို့ ကား ၁၀ စီးဖွငျ့ သယျဆောငျလာရာ ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ AA က ခွိမျးခွောကျပဈခတျမှုကွောငျ့ ပွနျလှညျ့ခဲ့ရကွောငျး၊ သို့ဖွဈ၍ ကုလားတနျမွဈကွောငျးအတိုငျး စကျလှဖွေငျ့ ပွောငျးလဲ သယျဆောငျရခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ဆနျအပါအဝငျ ရိက်ခာမြား၊ ဆေးဝါးမြား ကနဦးတငျဆောငျလာပွီး ပွနျလှညျ့ရသညျ့ အဆိုပါကားမြားမှာ ဧပွီ ၁၉ ညနတှေငျ ဆမီးသို့ လုံခွုံဘေးကငျးစှာ ပွနျရောကျနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://w ww.b nionline.net/mm/news-72317
သြှမျပွညျ မွောကျပိုငျး နမျ့လနျမွို့တှငျ Mask (နှာခေါငျးစညျး) မတပျဆငျပါက ပွဈဒဏျပေးမှုမြားပွုလုပျနကွေောငျး သတငျးရ ရှိသညျ။ နမျ့လနျမွို့ထဲသို့ ဝငျရောကျလာသညျ့ ပွညျသူမြား Maske တပျဆငျခွငျးမရှိပါက ထိုငျ၊ ထ အခါ ၃၀ ပွုလုပျရခွငျး (သို့မဟုတျ)ငှဒေဏျ တယောကျ ၁ သောငျးပေးဆောငျရကွောငျး နမျ့လနျဒသေခံမြား ပွောပွခကျြအရသိရသညျ။ “နမျ့လနျမွို့ အဝငျမှာ ဌာနဆိုငျရာတှစေောငျ့တယျ။ Mask မတပျရငျ ထိုငျ၊ထ အခါ ၃၀ လုပျရတယျ။ မလုပျခငျြရငျ ငှဒေဏျ ၁ သောငျး ပေးရတယျ။ ပွီးတော့ Mask ဝပေေးတယျ”ဟု နမျ့လနျ ဒသေခံ တဦး ဖွဈသညျ့ ကိုနိုငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။ ထိုကဲ့သို့ပွုလုပျခွငျးသညျ COVID-19ကို ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရနျ နှငျ့ လူတိုငျး Mask တပျဆငျပွီး အပွငျထှကျစခေငျြသညျ့ အတှကျ ပညာပေးခွငျးဖွဈကွောငျးလညျး ကိုနိုငျက ဆိုသညျ။
Mask မတပျသညျသူမြားကို ပွဈဒဏျပေးခွငျးသညျ ဧပွီ ၁၅ ရကျ မှစတငျကာ ပွဈဒဏျပေးသညျ့ စနဈကို လုပျဆောငျလာခဲ့ပွီး၊ စတငျလုပျဆောငျသညျ့ ရကျတှငျ Mask တပျဆငျသညျ့ မရှိသလောကျနညျးပါးကွောငျး နမျ့လနျမွို့ ဖွူစငျနှလုံးသား လူမှုကူညီ ရေး အသငျးမှ ကိုရနျနိုငျစိုး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ပွောသညျ။ ထိုပွဈဒဏျပေးသညျ့ စနဈကို နမျ့လနျမွို့မှ သကျဆိုငျရာဌာန အဖှဲ့မြား ဦးစီးပွီး ပွုလုပျခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
“စလုပျတဲ့ ရကျက တျောတျောမြားမြား မတပျကွဘူး။ အခုနောကျပိုငျးတော့ တပျလာကွတယျ။ ဒီနညျးက အောငျမွငျတယျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ”ဟု ကိုရနျနိုငျစိုးက ဆိုသညျ။ လကျရှိ အခြိနျထိ ထို ပွဈဒဏျပေးမှုကို ဆကျလကျပွုလုပျနသေေးကွောငျး သိရသညျ။ သကျဆိုငျရာ မြားအနဖွေငျ့ ပွညျသူမြားကို Mask တပျဆငျသညျ့ ကိစ်စတှငျ အသိပညာပေးမှုကို လကျခံသျောလညျး ပွညျသူမြား Mask ဝယျယူလှယျကူအောငျ နညျးလမျးရှာဖှပေေးရမညျဖွဈကွောငျး၊ ထို့ပွငျ လူတိုငျးလကျလှမျးမီသညျ့ ဈေးနှုနျး ဖွငျ့ ရောငျးခပြေးရနျလညျး နမျ့လနျ ပွညျသူမြားက တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.o rg/archives/1
ကခငျြပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ ၁၄ မွို့နယျတှငျ ည ၁၀ နာရီမှ နံနကျ ၄ နာရီအထိ ညမထှကျရ အမိနျ့ကို ယနေ့(ဧပွီ ၁၈ ရကျ) မှ စတငျထုတျပွနျခဲ့ကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ရုံး ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျောက ပွောကွားသညျ။ အဆိုပါ ည မထှကျရအမိနျ့ ထုတျပွနျခဲ့သညျ့ မွို့နယျမြားမှာ မွဈကွီးနား၊ ဝိုငျးမျော၊ တနိုငျး၊ ခြီဖှေ၊ မိုးကောငျး၊ မိုးညှငျး၊ ဖားကနျ့၊ ဗနျးမျော၊ မနျစီ၊ ရှကေူ ၊ မိုးမောကျ၊ ပူတာအို၊ မခမျြးဘော၊ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျတို့ ဖွဈသညျ။
ထိုသို့ ထုတျပွနျရသညျ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးမှာ COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ နအေိမျတှငျးနထေိုငျသညျ့ လူငယျမြား ည အခြိနျ မတျောထှကျကာ သောကျစားမူးယဈခွငျး၊ ခိုကျရနျဖွဈပှားခွငျး၊ပွညျသူလူထု၏ လုံခွုံရေး အခွအေနမြေားကွောငျ့ COVID-19 ကာကှယျ၊ထိနျးခြုပျကုသရေး အမြိုးသားအဆငျ့ ဗဟိုကျောမတီမှ ဧပွီလ ၁၇ ရကျ ကညှနျကွားလာခွငျးဖွဈ ကွောငျး ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျော၏ ပွောကွားခကျြအရ သိရသညျ။
ကခငျြပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျောက “ဒီက အတညျပွုမှာပါ။ ဖားကနျ့မှာ ကွျောငွာနပွေီ။ ပွဈဒဏျက တဈလ ကနေ ငှဒေဏျလညျး ရှိပါတယျ။ ဧပွီ ၃၀ ရကျအထိ အတညျဖွဈပါတယျ။ တိုငျးနှငျ့ပွညျနယျ အားလုံးမှာ ထုတျပွနျထား ပါတယျ”ဟုပွောကွားသညျ။https://news-eleven.com/article/169636
သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျမွို့နယျအတှငျးရှိ ဈေးသုံးရနျအတှကျ တအိမျလြှငျ ဈေးဝယျယူခှငျ့ကဒျ (၁) ကဒျ ထုတျပေးကာ ထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ထိုကဲ့သို့ပွုလုပျခွငျးသညျ COVID-19 ကို ကာကှယျသညျ့အနဖွေငျ့ ပွုလုပျခွငျးဖွဈပွီး လှိုငျလငျခရိုငျ အတှငျးရှိ လှိုငျလငျမွို့နှငျ့ ပငျလုံမွို့ မှ မွို့မဈေးမြားနှငျ့ ပြံကဈြေးမြားတှငျ ဧပွီ ၁၈ ရကျမှ စတငျကာ ဈေးဝယျ ထှကျပါက ဈေးဝယျခှငျ့ကဒျ ယူဆောငျသှားရမညျ ဟု လှိုငျလငျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး က သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။
လူစုလူဝေး မဖွဈစရေနျ အတှကျ မွို့မဈေးနှငျ့ ပြံကဈြေး ၂ နရော ခှဲထားကာ မနကျ ၅ နာရီ မှ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီထိသာ ဈေးရောငျးခသြှားမညျ ဖွဈပွီး၊ ဈေးဝယျသညျ့အခါ ကဒျပါမှသာ ဈေးဝယျခှငျ့ ပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသနျးလှငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ “ကဒျထုတျပေးရတဲ့ ရညျရှယျခကျြက ဈေးကိုသှားပွီးတော့ လူစုလူဝေး ဖွဈ တာကို လြှော့ခဖြို့ အဓိကပဲ”ဟု လှိုငျလငျမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသနျးလှငျ ကပွောသညျ။
ဈေးသှားသညျ့ အခါ စနဈတကဖြွဈရနျ နှငျ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကို ကာကှယျရနျအတှကျ လူစုလူဝေး မဖွဈအောငျ၊ ကာကှယျသညျ့ အနဖွေငျ့ ပွလုပျခွငျးဖွဈကွောငျး လှိုငျလငျမဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၂) လှတျတျောကိုယျစားလှယျ နနျးမွထှေး က သြှမျးသံတျော ဆငျ့ ကိုပွောသညျ။ တဈအိမျလငျြ ဈေးဝယျခှငျ့ ကဒျ (၁) ကဒျ ဖွငျ့သာ ဈေးသှားခွငျးဖွငျ့ မလိုအပျပဲ လူစုလူဝေး ဖွဈပျေါမှုကိုရှောငျရှား နိုငျမညျဖွဈရာ ၎င်းငျးကာကှယျရေးမှာ ထိရောကျမှု မြားစှာ ရှိမညျဖွဈကွောငျး COVID-19 ကာကှယျရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ ပငျလုံဒသေခံ စိုငျးဆု ကပွောသညျ။ သကျဆိုငျရာ က ထုတျပေးသညျ့ ဈေးဝယျခှငျ့ကဒျမပါဘဲ နအေိမျမှ အကွောငျးမဲ့ထှကျ သညျကိုတှရှေိ့ပါက လိုအပျသလို အရေးယူသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.or g/archives /16188
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး မူဆယျလာမညျ့ ခရီးသညျမြားကို ဧပွီ ၁၈ ရကျမှ စတငျကာ မိုငျးယု (၁၀၅)မိုငျတှငျ ၂၁ ရကျ စောငျ့ ကွညျ့ပွီး မှ မူဆယျမွို့ထဲသို့ဝငျခှငျ့ပွုမညျဟု မူဆယျမွို့နယျ စီမံခနျ့ခှဲမှု ကျောမတီ ထုတျပွနျခကျြအရသိရသညျ။ ထို ၂၁ ရကျ အတှငျး စောငျ့ကွညျ့ခံရသူမြားသညျ တရကျလြှငျ ၅ ထောငျကပျြနှုနျးဖွငျ့ မိမိစရိတျဖွငျ့ နထေိုငျရမညျဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျ ခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။
“မူဆယျဒသေခံ မဟုတျတဲ့သူတှေ မူဆယျလာရငျ ၂၁ ရကျ Quarantine အဖွဈနရေမယျ။ ၂၁ ရကျအတှကျ စားစရိတျ ကတော့ တယောကျကို တရကျ ၅ ထောငျ ကပျြပေးရမယျ။ အစိုးရ အနနေဲ့ Quarantine အတှကျ ဘတျဂကျြမခထြားပေး ဘူး။ အလှူရှငျရှိရငျတော့ အလှူရှငျကြှေးပါမယျ”ဟု မူဆယျ မွို့အမှတျ(၁) ပွညျနယျ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ စိုငျးကြျောသိနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။ အဆိုပါ quarantine ထားမညျ့နရောမြားမှာ မိုငျးယု (၁၀၅)မိုငျ အတှငျးရှိ ဘုနျးကွီး ကြောငျး ၂ ကြောငျးနှငျ့ အထကျတနျးကြောငျး တကြောငျးတို့တှငျ ပွငျဆငျထားကွောငျး စိုငျးကြျောသိနျး က ပွောသညျ။
“တခွား ဒသေကလူတှအေနနေဲ့ကတော့ ၂၁ ရကျ ဝငျကို ဝငျရမယျ။ ဒါပမေယျ့ မူဆယျဒသေခံတှေ အနနေဲ့ ကိုဗဈ ဖွဈတဲ့ နရောကလာရငျတော့ ၁၀၅ မိုငျမှာ ၂၁ ရကျ စောငျ့ကွညျ့သှားမယျ” ဟု စိုငျးကြျောသိနျး က ထပျလောငျးပွောသညျ။
မူဆယျမွို့သို့ လာရောကျသညျ့သူမြားအနဖွေငျ့ ကျောမတီမှစီစဉျဆောငျရှကျပေးသညျ့ Quarantine မြားတှငျ နထေိုငျလို ခွငျးမရှိပါက တညျးခိုခနျး၊ ဟိုတယျ မြားတှငျ မိမိအစီအစဉျဖွငျ့ Quarantine ဝငျရနျ ဆောငျရှကျပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျရေးသားထားသညျ။ Quaratine မဝငျလိုပါက မိမိလာရာလမျးအတိုငျး လှညျ့ပွနျရမညျဟုလညျး ဖျောပွ ထားသညျ။ သို့သျော တရုတျနိုငျငံကို မှီတငျးပွီး တပိုငျတနိုငျ လုပျကိုငျစားသောကျနသေညျ့ မူဆယျ ဒသေခံမြား အတှကျ စီးပှား ရေး ရိုကျခတျမှု ရှိကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16181
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ကရငျပွညျနယျ၊ မွဝတီမွို့တှငျ အှနျလိုငျးလောငျး ကစားပွုလုပျပွီး တရားမဝငျနထေိုငျသညျ့ တရုတျနိုငျငံ သား ၃၀ ဦးအား လောငျးကစားပွုလုပျရာတှငျ အသုံးပွုသော ဆကျစပျ ပစ်စညျးမြားနှငျ့အတူ ဧပွီလ ၁၇ရကျ(ယနေ့) မှနျးလှဲ ၃ နာရီ အခြိနျခနျ့က ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မွဝတီခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကွီး သကျလငျးဦး ကွီးကွပျကှပျကဲမှုဖွငျ့ ယနေ့ မှနျးလှဲ ၃ နာရီ အခြိနျ ခနျ့က ဒု-ခရိုငျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရဲမှူး စိနျဒှေး နှငျ့ မွဝတီမွို့နယျ ဒုမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူး ဒုရဲမှူး စိုးနိုငျဝငျးတို့ဦးစီးသော ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ပူးပေါငျးအဖှဲ့မှ မွဝတီမွို့၊ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ၊ ဝိဝကေရာမလမျးရှိ ကိုစညျသူ ပိုငျဆိုငျသညျ့ EMPEROR ဟိုတယျတှငျ တရုတျနိုငျငံသားမြား ထားရှိပွီး အှနျလိုငျးလောငျး ကစား ဂိမျးမြားပွုလုပျနကွေောငျး သတငျးအရ ဝငျရောကျရှာဖှမှေု တဈရပျပွုလုပျခဲ့သညျ။ ထိုသို့ ဝငျရောကျရှာဖှရောတှငျ တရုတျနိုငျငံသား လငျးရှောငျခနျြ (၂ဝ နှဈ) အပါအဝငျ တရုတျနိုငျငံသား ၃၀ ဦးတို့အား အှနျလိုငျး လောငျး ကစားပွုလုပျရာ၌ အသုံးပွုသညျ့ ကှနျပြူတာနှငျ့ ဆကျစပျ ပစ်စညျးမြားဖွဈသော Monitor (၃၀)လုံး၊ ကီးဘုတျ(၃၀)ခု၊ Mouse (၁၉)ခု၊ Mouse အောကျခံပွား (၁၉)ခု၊ မီးပလပျခုံ(၃)ခု၊ ဖုနျးအားသှငျးကွိုးခုံ(၁)ခု၊ TV ပါ ဝါကွိုး(၂၃)ခု၊ WIFI စကျ(၅) လုံး၊ M ခဲရောငျဖုနျး (၂၂)လုံး၊ MI ရှရေောငျဖုနျး (၈)လုံး၊ စားပှဲခုံ(၁၅)လုံး ထိုငျခုံ(၃၀)လုံး အစရှိသညျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြားနှငျ့ တရုတျနိုငျငံသားမြားအား ဖမျးဆီးရမိခဲ့ကွောငျး မွဝတီမွို့မရဲစခနျး၏ သတငျးထုတျပွနျ မှုအရ သိရသညျ။
အှနျးလိုငျးလောငျးကစားပွုလုပျပွီး တရားမဝငျနထေိုငျသညျ့ တရုတျနိုငျငံသား လငျးရှောငျခနျြး အပါအဝငျ တရုတျနိုငျငံသား ၃၀ ဦး နှငျ့ တရုတျနိုငျငံသားမြားအား လကျခံထားရှိသညျ့ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၄)ရပျကှကျ ဝိဝကောရာမလမျးရှိ EMPEROR ဟိုတယျပိုငျရှငျ ဦးစညျသူ(၃၅)နှဈတို့အား ဥပဒနှေငျ့အညီ အမှုဖှငျ့အရေးယူသှားမညျဟု မွို့မ ရဲစခနျးက သတငျးထုတျပွနျ ထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%a1%e1%80%bc%e1%80%94%e1%80%b9e18
၁၁။ သဈတောဌာန တောမီးရှို့မှုကွောငျ့ ဒသေခံရှာသူရှာသားမြား၏ နှဈရှညျဥယြာဉျခွံ ၄ဝနီးပါး မီးလောငျ ပကျြစီး
မှနျပွညျနယျ သထုံမွို့နယျ ဓနုကြေးရှာရှိ အစိုးရသဈတောဌာနမှ ဝကျဝံတောငျသဈတောကွိုးဝိုငျး ဧရိယာအနီးဝနျး ကငျြတှငျ စံပွသဈတောစိုကျခငျး အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျရနျ သဈတော ၂ဝဝဧက ခုတျထှငျရှငျးလငျးကာ မီးရှို့မှုကွောငျ့ ဒသေခံမြား၏ ဥယြာဉျခွံမြားပါ မီးကူးစကျသှားခဲ့ပွီး နှဈရှညျ ဥယြာဉျခွံ ၄ဝနီးပါး မီးလောငျပကျြစီးသှား ကွောငျး ဒသေခံမြား၏ ပွောပွခကျြမြားအရ သိရသညျ။ ဧပွီလ ၁၁ရကျ၊ မှနျးလှဲ ၂နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ သထုံမွို့နယျ၊ သဈတောဦးစီးဌာနမှ ဝနျထမျး မြားက အဆိုပါတောမီးကို ရှို့ခဲ့သညျ့အတှကျကွောငျ့ ဓနုကြေးရှာရှိ ဒသေခံမြား၏ ဘိုးဘှားအစဉျအဆကျက အသကျမှေးဝမျး ကြောငျးလုပျငနျးအဖွဈ စိုကျပြိုးလာခဲ့သညျ့ ဒူးရငျး၊ နာနတျ၊ မီးကှတျ၊ ကှမျးပငျ၊ ကှမျးရှကျနှငျ့ ရာဘာပငျမြားမှာ မီးလောငျ ပကျြစီးသှား ခဲ့သဖွငျ့ အခြိနျမှီ ပွနျလညျစိုကျပြိုးနိုငျရနျ အမွနျဆုံး ကူညီပေးစလေိုကွောငျး ဓနုကြေးရှာဒသေခံမြားက ပွောဆို သညျ။
ဓနုကြေးရှာသူ နောငျမိတုက “မီးရှို့တာ မလုပျဖို့ တဈရှာလုံး တားမွဈခဲ့ပမေယျ့ တားမရခဲ့ဘူး။ ကမြရာဘာခွံ ၅ဧက မီးလောငျ ထဲ ပကျြစီးသှားတယျ။ ဒီရာဘာပငျကနပေဲ ကလေးတှရေဲ့ ပညာရေး မိသားစုစားဝတျနရေေးတှေ ဖွရှေငျး ပေးနတောပါ။ အခွားအလုပျတှလေညျး မလုပျစားတတျဘူး။ စားဝတျနရေေးအတှကျ ကောကျညငျးထုတျရောငျးပွီး အခုဖွရှေငျးနရေတယျ။ အခြိနျမှီပွနျစိုကျနိုငျအောငျ ကူညီပေးစခေငျြတယျ။”ဟု ယမနျနေ့ ဧပွီလ ၁၉ရကျနကေ့ ကေ အိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ “သဈတော စံပွစိုကျကှကျ လာဖျောထုတျတာ KNU ဘကျက အုပျခြုပျရေးရော၊ ရပျရှာမှာရှိတဲ့ အုပျခြုပျရေးရော တဈယောကျမှ မသိရဘူး။ တားမွဈစာပို့ပွီးမှ သဈတောက လုပျပါတယျဆိုပွီး သိရတယျ။ နှဈဖကျညှိနှိုငျးပွီး လုပျ ဆောငျရမယျ့အခြိနျမှာ သူတို့မလုပျခဲ့ဘူး။ ဖုနျးနဲ့ပဲ အသိပေးတယျ။ ရှဆေ့ကျမလုပျဖို့ ကနြျောတို့ KNU ဘကျက မတ်ေတာရပျခံခဲ့တယျ။ သူတို့မှားသှားတယျလို့ပဲ ပွောတယျ။”ဟု KNU သထုံမွို့နယျ တရားရေးအထောကျအကူပွု အဖှဲ့ဝငျ ဓနုကြေးနယျအုပျစုဥက်ကဌ ပဒိုစောသားသားက ဧပွီလ ၁၆ရကျနတှေ့ငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
မှနျပွညျနယျ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာမငျးကွညျဝငျးက “သဈတောမီးရှို့တာ တော့ ဟုတျပါပွီး။ ဒါပမေယျ့ ပတျဝနျးကငျြကို ထိခိုကျတယျ။ ပွညျသူတှထေိခိုကျတဲ့အပျေါမှာ ကနြျောတို့အစိုးရ အဖှဲ့ အပျေါမှာ တာဝနျရှိတာပေါ့ဗြား။ ဌာနက တာဝနျရှိတယျ။ ကနြျောဝနျကွီးမှာ တာဝနျရှိတယျ။ ပွညျနယျအစိုးရပွီး ရငျ ပွညျထောငျစု အစိုးရရှိမယျပေါ့ဗြာ။ တာဝနျခံမှု တာဝနျယူမှုဆိုတာကတော့ ရှိရမှာပေါ့လေ။ တောငျသူတှေ နဈနာ တယျဆိုရငျ ကနြျောတို့က လုပျနညျးလုပျထုံးအဆငျ့ဆငျ့တငျပွပွီး လုပျရမယျကိစ်စဖွဈပါတယျ။ ကနြျောတို့မှာ စိစဈရ မယျ့အပိုငျးရှိတယျ။ အရေးယူရမယျ့ အပိုငျးရှိတာပေါ့နျော။ ကနြျောအားနညျးခကျြရှိရငျ ကနြျောကိုယျတိုငျကလညျး အရေးယူခံပါ့မယျ။ လတျတလောကတော့ ကှငျးဆငျးစဈဆေးဖို့ရော လူထုနဲ့တှဆေုံ့ဖို့ရော စီစဉျထားတယျ။”ဟု ဧပွီ ၁၆ရကျနေ့ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
နိုငျငံတျောက အကောငျအထညျဖျောဆောငျရှကျမညျ့ ဓနုသဈတောကွိုးဝိုငျး စံပွသဈတောစိုကျခငျးနရောသညျ ဓနု ကြေးနယျ ရှာ ဒသေခံအမြားစုက စိုကျပြိုးရေးဖွငျ့ မှီခိုအားထားနရေသညျ့ သဈတောဥယြာဉျခွံရှိရာ တောငျတနျး လညျးဖွဈပွီး တောမီးရှို့ ခွငျးကွောငျ့ ထိခိုကျပကျြစီးဆုံးရှုံးရသညျ့အပွငျ ၎င်းငျးကြေးရှာရှိ ဒသေခံမြားအတှကျ သောကျသုံးရအေရငျးအမွဈလညျး ရှားပါး သှားကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုနကွေသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%9e%e1%80%85% e1%80%b9 %e1%80%b1%e1%80%900
ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး (ကအေနျယူ) လကျအောကျခံ တပျမဟာ-၁ တပျရငျး ၂ ရဲ့ COVID-19 ကာကှယျထိနျးခြုပျရေး လုပျဆောငျခကျြနဲ့ပတျသကျပွီး ကရငျပွညျနယျ လုံခွုံရေးနှငျ့နယျစပျရေးရာဝနျကွီးက ကနျ့ကှကျထားပါတယျ။ ဧပွီ ၁၇ ရကျ နေ့ စှဲ နဲ့ ကအေနျယူ ဗဟိုနှငျ့တပျမဟာဆကျဆံရေးရုံးဆီ ပေးပို့တဲ့ ကနျ့ကှကျစာမှာ ကအေနျယူအနနေဲ့ အနျစီအေ သဘောတူ စာခြုပျပါအတိုငျး လိုကျနာဆောငျရှကျသှားဖို့နဲ့ နယျဘကျအုပျခြုပျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျတှမှော ဝငျရောကျစှကျဖကျမှုတှေ မပွု လုပျဖို့ တပျဖှဲ့ဝငျတှကေို ထိနျးသိမျးကွပျမတျပေးဖို့ ပါရှိပါတယျ။
ကအေနျယူ လကျအောကျခံ တပျမဟာ-၁ တပျရငျး ၂ အနနေဲ့ ဧပွီ ၁၅ ရကျနကေ့ သထုံမွို့နယျ ထုံးဘိုကွီးကြေးရှာ သိမျးဆိပျ-ပိန်နဲတော-လေးကေ သှားတဲ့လမျးမပျေါမှာ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတျသကျပွီး ဖွတျသနျးသှားလာသူတှကေို အပူခြိနျတိုငျးတာ၊ လိုအပျတဲ့ စဈဆေးမေးမွနျးမှုတှကေို ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ခရီးသှားပွညျသူတှကေို နစေ့ဉျ မနကျက ၅ နာရီကနေ ၂ နာရီ အခြိနျထိသာ သှားခှငျ့ပွုမှာဖွဈကွောငျး၊ မလိုအပျဘဲ ခရီးသှားလာမှုတှရှေောငျရှားဖို့၊ တတျနိုငျသမြှ နအေိမျတှငျးသာ နထေိုငျဖို့၊ လူစုလူဝေး ဖွဈပျေါစနေိုငျတဲ့ ပှဲလမျးသဘငျတှကေို မကငျြးပဖို့ အသိပေး အကွောငျးကွားထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအပျေါ ကရငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လုံခွုံရေးနှငျ့နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မြိုးမငျးနောငျက လကျမှတျထိုးပွီး ကနျ့ကှကျလှာပေးပို့ထားတာ ဖွဈပါတယျ။ လံခွုံရေးနှငျ့နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးမြိုးမငျးနောငျရဲ့ ကနျ့ကှကျလှာနဲ့ ပတျသကျပွီး ကအေနျယူလကျအောကျခံ တပျမဟာ ၅ ဌာနခြုပျကလညျး ဒီကနျ့ကှကျလှာပါ နရောတှဟော တပျမဟာ ၅ ထိနျးခြုပျနယျမွမှောရှိနကွေောငျးနဲ့ ရောဂါကွိုတငျကာကှယျတားဆီးရေး လုပျဆောငျမှုကို ကနျ့ကှကျတာဟာ ဒသေခံ ကရငျ ကြေးရှာလူထုအပျေါ မမှနျကနျတဲ့ သဘောထားဖွငျ့ ရောဂါပိုးကူးစကျစလေိုတဲ့သဘော သကျရောကျနကွေောငျး ပွနျလညျ ထုတျပွနျကနျ့ကှကျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကရငျပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ လုံခွုံရေးနှငျ့နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီး မြိုးမငျးနောငျရဲ့ ကနျ့ကှကျမှုကို အလေးအနကျ ပွနျလညျကနျ့ကှကျကွောငျး ဧပွီ ၁၇ ရကျစှဲနဲ့ ပွနျလညျထုတျပွနျခဲ့တာပါ။ http://burmese.dvb.no/archives/383394
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ ည ၁၀ နာရီမှ မနကျ ၄ နာရီအတှငျး ညမထှကျရ အမိနျ့ အပါအဝငျ Covid-19 ရောဂါ အရေးပျေါကာလ အမြားပွညျသူလိုကျနာရမညျ့ စညျးကမျးခကျြ ၄ ရပျကို ကရငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့က ယနေ့ ဧပွီလ ၁၈ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျလိုကျကွောငျး သိရသညျ။
ကရငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့မှ ဧပွီလ ၁၈ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျထားသော အမိနျ့စာတှငျ မညျသူမဆို လုံလောကျ သောအကွောငျး ပွခကျြမရှိဘဲ နစေ့ဉျ ည(၁၀)နာရီမှ နံနကျ(၄)နာရီ ခြိနျအတှငျး နအေိမျပွငျပသို့(လုံးဝ) ထှကျခှာခွငျး မပွုရနျ၊ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုအတှကျ သှားရောကျနရေသညျ့ ယာဉျ/လူပုဂ်ဂိုလျမြားသညျ သကျဆိုငျရာ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန၊ အကောကျအခှနျဦးစီးဌာနနှငျ့ ကုနျသှယျရေးဦးစီးဌာနတို့၏ စိစဈခှငျ့ပွုခကျြဖွငျ့ သတျမှတျနရောမြား၌ လမျးညှနျခကျြနှငျ့အညီ ဆောငျရှကျသှားရနျ ဖျောပွပါရှိသညျ။
ထို့အပွငျ ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ နခေ့ငျးဘကျတှငျလညျး မဖွဈမနေ ပွငျပသို့သှားလာရနျကိစ်စရှိပါက အိမျထောငျစုတဈစုလြှငျ (၁)ဦးသာ ထှကျရနျနှငျ့ နှာခေါငျးစညျး (Mask ) မတပျဘဲ အိမျပွငျသို့ထှကျခှာခွငျး (လုံးဝ)မပွုလုပျရနျနှငျ့ ဈေးအသီးသီးရှိ ဈေးရောငျးဈေးဝယျ လုပျသားပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ နှာခေါငျးစညျးမြား တပျဆငျထားပွီး ဈေးရောငျး ဈေးဝယျပွုလုပျကွရနျ အစရှိသညျ့ အမိနျ့ကွညောခကျြကို ကရငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ စာအမှတျ (၄/၂၀၂၀) ယနေ့ ဧပွီလ ၁၈ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ထုတျပွနျကွညောထားသညျ။
နယျစပျမွို့ဖွဈသော ကရငျပွညျနယျ မွဝတီခရိုငျ/မွို့နယျတှငျ ပွညျပအဝငျအထှကျမြားပွားခွငျး၊ နယျစပျကုနျ သှယျရေးလုပျ ငနျး မြားနှငျ့ ဆကျစပျသညျ့ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားရှိခွငျးတို့ကွောငျ့ Covid-19 ရောဂါ ပွနျ့ပှားမှု မဖွဈပျေါစရေေးနှငျ့ ကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေးလုပျငနျးမြားအား အထောကျအကူဖွဈစရေနျအတှကျ ပွညျသူမြား အနဖွေငျ့ ဧပွီလ ၁၈ ရကျနမှေ့စ၍ အမိနျ့တဈစုံ တဈရာထပျမံထုတျပွနျမှုမရှိမခွငျး ဖျောပွပါစညျးကမျးခကျြမြားကို နစေ့ဉျလိုကျသှားကွရနျနှငျ့လိုကျနာရနျ ပကျြကှကျပါက တညျဆဲဥပဒအေရ အရေးယူသှားမညျဟု သိရသညျ။ ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ ပွီးခဲ့သညျ့ရကျပိုငျးက ထိုငျးနိုငျငံဒသေ အသီးသီးမှ ဝငျရောကျလာသညျ့ မွနျမာရှေ့ ပွောငျးလုပျသား ၁,၅၀ဝ ခနျ့ကို စောငျ့ကွညျ့ရေးစခနျး ၆ ခုတှငျ ထားရှိပွီး ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား နစေ့ဉျ ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/covid19%e1% 80%a1%e1%80%b1%e1%80%9b%e1 %80%b8%b1%e1%80%95%e1%81%9a%e1%80
ဖားကနျ့ ကြောကျစိမျးလုပျကှကျတဈခုတှငျ ယနေ့ မနကျ မွစောပုံပွိုကမြှုကွောငျ့ ရမေဆေးသမား ၁၀ ဦးထကျမနညျး သဆေုံး နိုငျကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။ ယနေ့ နံနကျ ၅ နာရီခနျ့တှငျ အေးမွသာယာရပျကှကျ ဗလခကြေးရှာအနီး ပိုငျဖွိုးသီဟ အမညျရှိ ကြောကျမကျြတူးဖျောရေးကုမ်ပဏီတှငျ မွစောပုံပွိုကလြာပွီး ရမေဆေးသမားမြား ၁၀ ဦးခနျ့ ပါသှားသညျ ဟု ဖားကနျ့ဒသေခံ ဦးနောငျလတျက KNG သတငျးဌာနသို့ ပွောဆိုခဲ့သညျ။
“အခုမွစောပုံပွိုကတြဲ့ နရောက အနီးတဝိုကျရှိတဲ့ ကုမ်ပဏီတှေ စှနျပဈနတေဲ့ မွစောပုံကွီးဖွဈတယျ။ အဲ့တော့ မနကျ ၄ နာရီ အခြိနျမှာက ရမေဆေးသမားတှေ ကြောကျဝငျရှာနတေော့ အဲ့မွစောပုံက ပွိုကသြှားတာဖွဈတယျ။”ဟု ပွောသညျ။
ကယျဆယျရေးအဖှဲ့မြားမှ အလောငျရှာဖှရေေး ဆကျလကျဆောငျရှကျနပွေီး လကျရှိတှငျ သဆေုံးသူတဈဦး၏ အလောငျးရှာ ဖှတှေရှေိ့ခဲ့ကွောငျးလညျး သူကဆကျလကျပွောသညျ။ တှရှေိ့ထားသညျ့ သဆေုံးသူတဈဦးမှာ အသကျ ၂၂ အရှယျခနျ့ရှိပွီး လကျရှိ ဖားကနျ့ မှျောမျောလယနျတှငျနထေိုငျပွီး နရေပျဇာတိမှာ မိုးကောငျးမွို့ကြှနျးတောရပျကှကျမှ ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။ လကျရှိ ပွိုကသြှားသညျ့ မွစောပုံမှာ မွနျမာသူရ၊ ယူနတီနှငျ့ ပိုငျဖွိုးသီဟ စသော ကြောကျစိမျး တူးဖျောသညျ့ ကုမ်ပဏီမြား၏ စုပေါငျးစှနျ့ ပဈ မွစောပုံကွီးဖွဈပွီး ပေ ၁၅၀ ခနျ့ နကျတှငျးဖွဈကွောငျး ဦးနောငျလတျ ထံမှ သိရသညျ။ https://burmese.kac hinnews.com/2020/04/20/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%
ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျတှအေတှငျး အစိုးရတပျနဲ့ ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့ AA တို့ကွားမှာ အရပျသားတှေ ထိခိုကျသကေနြေရေ တဲ့အထိ အရှိနျမွငျ့နတေဲ့ တိုကျပှဲတှေ အဆုံးသတျကွဖို့ ကုလသမဂ်ဂက တောငျးဆိုလိုကျပါတယျ။ ဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျလို့ ဗှီအိုအေ သတငျးထောကျ Lisa Schlein ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ ဂနြီဗာမွို့ကနေ ပေးပို့ထားတဲ့သတငျးကို မခှာညိုက တငျပွပေး ထားပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ လအတှငျး မွနျမာနိုငျငံကနေ ထှကျပွေးကွတဲ့ ရိုဟငျဂြာ ဒုက်ခသညျတှထေဲက ဒါဇငျနဲ့ခြီပွီး ပငျလယျပွငျ မှာ သဆေုံးခဲ့ကွရသလို ရာနဲ့ခြီပွီး သောငျတငျနတေဲ့ အဖွဈတှနေဲ့ ကွုံနရေခြိနျမှာပဲ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခတှလေညျး ဆကျလကျ ဖွဈပှားနတောပါ။
ပငျလယျပွငျမှာ သဆေုံးခဲ့ကွရသူတှဟော မွနျမာစဈတပျနဲ့ ရခိုငျတိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တို့ကွားက တိုကျပှဲတှနေဲ့ တော့ တိုကျရိုကျ ဆကျနှယျနတောမြိုးတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ လကျနကျကိုငျ ပုနျကနျမှုတှဟော လူ နညျးစုတှအေပျေါ ခှဲခွားဆကျဆံမှုနဲ့ ဖိနှိပျမှုတှကေို ဆနျ့ကငျြတျောလှနျတဲ့ လုပျရပျအဖွဈနဲ့လညျး အကဲခတျတှကေ ရှုမွငျထား ကွပါတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ ကျောမရှငျနာမငျးကွီးရုံး ပွောခှငျ့ရ Rupert Colville ကတော့ လတျတလော မွနျမာစဈတပျနဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့တို့ကွား ဖွဈပှားနတေဲ့ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျနဲ့ အတူ ကပျလကျြ ရှိနတေဲ့ ခငျြးပွညျနယျမှာပါ နထေိုငျနကွေတဲ့ ရိုဟငျဂြာ၊ ခငျြး၊ မွို၊ ဒိုငျးနကျတို့အပွငျ တခွားအရပျသားတှနေဲ့ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးစုတှေ ထိခိုကျနရေတယျလို့ ပွောပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အခုလို COVID-19 ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဘေး ကရြောကျနတေဲ့အခြိနျမှာ တကမ်ဘာလုံးက တိုကျပှဲမှနျသမြှ ရပျထားပေး ကွဖို့ ကုလသမဂ်ဂ အတှငျးရေးမှူးခြုပျရဲ့ မတ်ေတာရပျခံခကျြကိုလညျး နှဈဖကျစလုံးက မသိကြိုးကြှံ ပွုနခေဲ့ကွကွောငျး Colville က ပွောပါတယျ။ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေခြိနျမှာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ ဇှနျလကစလို့ ရခိုငျနဲ့ ခငျြးပွညျနယျက မွို့နယျ ၉ ခုမှာ အစိုးရက အငျတာနကျ ဆကျသှယျမှုတှေ ဖွတျတောကျထားတာဟာလညျး အခွအေနကေို ပိုဆိုးစခေဲ့ကွောငျး ပွောခှငျ့ ရ သူက သတိပေးထားပါတယျ။ အငျတာနကျ ဆကျသှယျမှုတှေ ပိတျထားတာကို မွနျမာအစိုးရက ခကျြခငျြးပွနျဖှငျ့ပေးဖို့နဲ့ပဋိပက်ခ ဒဏျကို ခံစားနကွေရတဲ့ ဒသေတှမှော လူသားခငျြး စာနာမှု အထောကျအပံ့တှေ ပေးနိုငျအောငျ ခှငျ့ပွုဖို့လညျး လူ့အခှငျ့အရေး ဆိုငျရာ ကုလသမဂ်ဂ မဟာမငျးကွီးရုံးက တောငျးဆိုထားပါတယျ။ လိုကျနာဆောငျရှကျဖို့ ပကျြကှကျမယျဆိုရငျ တော့ ပဋိပက်ခဖွဈ ရာ ဒသေတှမှော အရပျသားတှေ အတိဒုက်ခရောကျနတေဲ့ အခွအေနေ ပိုဆိုးလာမှာဖွဈသလို အငျမတနျ ဆိုးရှားပွငျးထနျတဲ့ COVID-19 ကပျရောဂါကို တိုကျဖကျြဟနျ့တားရာမှာ အဟနျ့အတား ဖွဈစလေိမျ့မယျလို့လညျး Mr. Colville က သတိပေးထားပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/myanmararmyaafightingin rakhinechin/537856.html
၁၆။ အအေကေ အရပျသားမြားကို တိတျတဆိတျ ဖမျးချေါ၊ စဈဘေးရှောငျအရေး ဆောငျရှကျသူမြားကိုလညျး ခွိမျးခွောကျ ဟု KACC ထုတျပွနျ
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့ပျေါရှိ အရပျသားမြားကို အအေေ ရခိုငျလကျနကျကိုငျအဖှဲ့က ညဘကျတှငျတိတျတဆိတျ ဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားရနျ ကွိုးစားအားထုတျမှု ရှိခဲ့ကွောငျး ခူမီး ခငျြးမြိုးနှယျစုမြားရေးရာပေါငျးစပျညှိနှိုငျးရေးကောငျစီ(KACC)က ဧပွီ ၁၆ ရကျတှငျ ထုတျပွနျကွညောသညျ။ ယငျးအပွငျ စဈဘေးရှောငျမြားအရေး ဆောငျရှကျပေးသူမြားကို ခွိမျးခွောကျမှုမြား လညျး ရှိနကွေောငျလညျး ပါဝငျသညျ။
KACC မှ ညှိနှိုငျးရေးမှူး ဦစောမွက “အခု ထုတျပွနျခကျြ ထုတျရတာက ခုလကျရှိ မွပွေငျမှာ ဖွဈပှားနတောကို နှဈဖကျအဖှဲ့ အစညျးတှေ သိရှိဖို့၊ အဓိကတော့ တာဝနျရှိခေါငျးဆောငျတှေ သိရှိစဖေို့နဲ့ အမြားပွညျသူ သိရှိဖို့ ဖွဈတယျ”ဟု ပွောသညျ။ ပလကျဝမွို့ မွို့သဈရပျကှကျနေ ဦးအောငျပ၊ ဦးလငျးဗနျတို့ကို ဧပွီ ၁၀ ရကျ၊ မွို့နယျစညျပငျသာရေးကျောမတီဝငျ ဦးမွငျ့မောငျ ကို ဧပွီ ၁၂ ရကျနမြေ့ားတှငျ အအေကေ ဖမျးဆီးသှားကွောငျး ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။
သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးအနဖွေငျ့ မတရားဖမျးဆီးထားသူမြားအား အမွနျဆုံးလှတျပေးရနျ၊ စဈဘေးရှောငျမြားအရေး စာနာ ထောကျထားမှုဆိုငျရာ ပံ့ပိုးခွငျးမြားကို ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးရနျလညျး လကျနကျကိုငျ နှဈဖကျအဖှဲ့ထံ တောငျးဆိုထားသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72294
COVID-19 ကူးစကျပွနျ့ပှားမှု ထိနျးခြုပျကာကှယျနိုငျဖို့ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျဖွူမွို့မဈေးနဲ့ ရပျကှကျပြံကဈြေးအခြို့ကို ပိတျသိမျးပွီး ယာယီဈေးတှေ ဖှငျ့လှဈပေးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဧပွီ ၁၈ ရကျနကေ့ စတငျပွီး ကှငျးပွငျတှမှော ယာယီ ဈေးတှဖှေငျ့လှဈပွီး ဆိုငျနရောအကယျြအဝနျးသတျမှတျကာ ရောငျးခနြိုငျအောငျ စီစဉျပေးထားတယျလို့ ကြောကျဖွူ စညျပငျ သာယာရေး ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသနျးဝငျက ပွောပါတယျ။
“COVID-19 ရောဂါလညျး ဖွဈလာတဲ့အတှကျ လူနထေူထပျပွီးတော့ စုစုဝေးဝေးနဲ့ မဖွဈစအေောငျ တခုရယျ၊ နောကျတခါ လူတှေ ဝယျတဲ့အခါမှာ ရောဂါအန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ ဈေးဝယျနိုငျအောငျအတှကျ ကနြျောတို့က သကျဆိုငျရာကှငျးတှမှော တဆိုငျနဲ့တဆိုငျ ၆ ပအေကှာ၊ လမျးဆိုရငျ ၈ ပအေကယျြ အကှကျရိုကျပွီးတော့ ရောငျးခနြိုငျဖို့အတှကျ စီစဉျပေးထားတာ ဖွဈပါ တယျ။” ကြောကျဖွူမွို့ပျေါမှာ ယာယီဈေးနရော ၃ နရော သတျမှတျကာ အခွခေံစားသောကျကုနျတှေ၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ သားငါးတှေ ရောငျးခပြေးနိုငျဖို့ အဓိကထားကာလုပျဆောငျပေးနတေယျလို့ ဦးသနျးဝငျး ဆိုပါတယျ။ http://bur mese.dvb.no/archives/383283
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော UNA/AA တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ နရေပျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနရေ သညျ့ စဈရှောငျဒုက်ခသညျမြားအတှကျ စားနပျရိက်ခာမြား အရေးပျေါ လိုအပျနသေညျဟု သိရသညျ။ မတျလကုနျအထိ စာရငျး မြားအရ ကြောကျတျော၊ ရသတေ့ောငျနှငျ့ မငျးပွားမွို့နယျတို့တှငျ စဈရှောငျဦးရေ ၃၀,ဝဝဝ ခနျ့ တိုးလာပွီး စားနပျရိက်ခာ မလုံမ လောကျ ဖွဈနရေသညျဟု အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။
ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြိုးနှယျမြား အစညျးအရုံး REC အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးဇျောဇျောထှနျးက “အခုက ရိက်ခာအနနေဲ့ ကတော့ လောလောလတျလတျ တိုးလာတဲ့ ဒုက်ခသညျတှအေတှကျဆိုရငျ အစိုးရက ပုံမှနျထောကျပံ့ပေးနတေဲ့ လူတဈဦးကို ၃၀ဝ နှုနျး စားနပျရိက်ခာအတှကျကလညျး မရရှိကွသေးဘူး။ ဒါတှကေ ကြောကျတျော၊ မငျးပွားဘကျမှာရှိတယျ။ တျောတျော မြားမြား စခနျးတှမှောက ICRC (အပွညျပွညျဆိုငျရာ ကွကျခွနေီကျောမတီ)တို့ ၊ WFP (ကမ်ဘာ့စားနပျရိက်ခာအစီအစဉျ )တို့က ပုံမှနျ ဆနျအပါအဝငျ ပဲတို့၊ ဆီတို့ထောကျပံ့ပေးတာရှိတယျ။ အခုကတြော့ Covid လညျး ဖွဈလာတော့ အစီအစဉျတှေ ပွောငျးလဲတာတို့ ဖွဈလာတာပေါ့နျော၊ ဆိုတော့ တခြို့ Camp တှဆေို ပုံမှနျ ရိက်ခာမရောကျတာမြိုးတှလေညျး ဖွဈလာပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ တပျမတျောစဈကွောငျးမြားက ဒသေတှငျး အလှူရှငျမြားကို လမျးခရီးတှငျ တားဆီးပိတျပငျမှုမြား၊ စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျနသေညျ့အတှကျ စားနပျရိက်ခာ အခကျအခဲမြား ဖွဈနရေသညျဟု စဈရှောငျမြားက ပွောသညျ။
တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ မငျးပွား၊ မွောကျဦး၊ ကြောကျတျော၊ ပုဏ်ဏားကြှနျး၊ မွပေုံ၊ အမျး၊ ရသတေ့ောငျ၊ ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော၊ စဈတှနှေငျ့ ပေါကျတောမွို့နယျမြားမှ ဒသေခံပွညျသူမြားမှာ စဈဘေးလှတျရာနရောမြားတှငျ စဈရှောငျနကွေသညျ။ စဈတှမွေို့က လူ့အခှငျ့အရေး တကျကွှလှုပျရှားသူ ကိုခိုငျမြိုးထှနျးကလညျး “အခုဖွဈစဉျက ပုဏ်ဏားကြှနျး မွို့နယျ ကြောကျဆိပျ ကြေးရှာမှာ ဖွဈတာ။ ဒါပမေယျ့ ရခိုငျပွညျ တဈပွညျလုံးမှာက တခွား ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော၊ မွောကျဦးရယျ၊ ကြောကျတျောရယျ၊ မငျးပွားရယျပေါ့လေ။ တဈခြို့ဆို အမျးတောငျရှိပါတယျ။ အဲဒီကနပွေီးတော့ လာတဲ့ စဈဘေးရှောငျတှေ တောငျမှ စားဝတျနရေေးကို အရမျးကို ရုနျးကနျနရေတယျ”ဟု ပွောသညျ။
လကျရှိစခနျးမြားရှိ စဈဘေးဒုက်ခသညျမြားအတှကျ မဆငျမပွမှေုပေါငျး မွောကျမြားစှာ ရှိသလို ယခုလပိုငျးအတှငျး ထပျမံတိုး လာသညျ့ စဈဘေးရှောငျမြားအတှကျ နရောထိုငျခငျးနှငျ့ ထောကျပံ့မှုမြား လုံးဝ မရှိနိုငျတော့ဟု ဆိုသညျ။ ထို့ကွောငျ့ နီးစပျရာ တှငျ ကွုံသလို တိမျးရှောငျနသေူမြား အလှနျမြားပွားလာနပွေီး ယငျးတို့၏ အခကျအခဲမှာလညျး လှနျစှာစိုးရိမျဖှယျရာ ဖွဈလာ နသေညျဟု REC က ထုတျပွနျထားသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ နရေပျစှနျ့ခှာ စဈရှောငျနရေသူ ဦးရေ တဈသိနျးခှဲကြျောသှားပွီ ဖွဈပွီး စဈရှောငျစခနျးပွငျပ စဈရှောငျနရေသူမြားက ပိုမြားနသေညျဟု စဈတမျးမြား ကောကျခံထားသညျ့ REC က ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72282
မှနျပွညျနယျ၊ ရေးမွို့နယျ၊ လမိုငျးမွို့တှငျ အုပျစုဖှဲ့ကာ ခိုကျရနျဖွဈခဲ့သညျ့ လူငယျ ၃၉ ဦးအား ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၃၂၆ (ဓါးခုတျမှု) နှငျ့ ရနျပှဲတှငျပါဝငျပွီး အားပေးကူညီခဲ့သညျ့အတှကျ ပုဒျမ (၁၁၄) ဖွငျ့ အရေးယူထားကွောငျး ရေးမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့ မှူး ရုံးမှ သိရသညျ။
Covid-19 ရောဂါထိနျးခြုပျကာကှယျရေး လုပျဆောငျနသေညျ့ ကာလအတှငျး ဧပွီ ၁၇ ရကျနေ့ ညက လမိုငျးမွို့တှငျ လူငယျ မြား ဆိုငျကယျ ကိုယျစီဖွငျ့ အိမျမြားကို ခဲဖွငျ့ပေါကျခွငျး၊ ဆဲဆိုခွငျးမြား ပွုလုပျနသေညျ့ ရုပျသံဖိုငျ တခုလူမူ ကှနျရကျတှငျ ထှကျပျေါသဖွငျ့ ပွညျသူမြားက အရေးယူမှာလားဆိုသညျ့မေးခှနျးမြား ထှကျပျေါလာခဲ့သညျ။ ရေးမွို့နယျ ရဲတပျဖှဲ့မှူးရုံး ရဲမှူး သိနျးဇျော က “သမီးရညျးစားလုရငျး ရနျဖွဈကွတာ။ ခု ၃၉ ယောကျကို စခနျးမှာပဲ ဖမျးထားတယျ။ ဓါးခုတျခံရတဲ့ တယောကျက တရားလိုလုပျပွီး ဥပဒကွေောငျးအရ ရုနျးရငျးဆနျခတျ ဖွဈတဲ့အတှကျ ရာဇသတျကွီးဥပဒနေဲ့ အရေးယူထားပါတယျ။ ခုဖမျးထား တဲ့ အထဲမှာ ၁၆ နှဈအောကျ ကလေးတှလေညျး ပါတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
Covid-19 ရောဂါကာကှယျ ထိနျးခြုပျရေး ကာလအတှငျး သကျဆိုငျရာမွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးမြားက လူစုလူဝေး ဖွဈစသေော ပှဲတျောအခမျးအနားစသညျ့ မပွုလုပျရသလို ယခုကဲ့သို့ လူအမြားစုဖှဲ့ပွီးလညျး သှားလာခွငျး မပွုလုပျရပါဆိုသညျ့ ဒသေန်တရ အမိနျ့ ထုတျပွနျထားသညျ။ ထိုအမိနျ့ကို ခြိုးဖောကျပါက တညျဆဲဥပဒမြေားဖွငျ့ အရေးယူမညျဟု ပါရှိပွီး ၎င်းငျးတို့ကို Covid-19 ကာလအတှငျး ဒသေန်တရအမိနျ့ကို ခြိုးဖောကျခွငျးဖွဈသဖွငျ့ အရေးယူရနျကိစ်စက အထှထှေေ အုပျခြုပျရေးမှူးနှငျ့ ကနျြးမာရေး ဌာန၏ တာဝနျသာဖွဈသညျဟု ရဲမှူး သိနျးဇျောက ဆိုသညျ။
ဧပွီလ ၁၇ ရကျနကေ့ လမိုငျးမွို့ရှိ လူငယျမြားနှငျ့ သောငျပွငျကြေးရှာ လူငယျမြားသညျ စကားမြားရာမှ သောငျပွငျကြေးရှာမှ လူငယျမြားက လမိုငျးမွို့ကို လိုကျလာခဲ့သဖွငျ့ လမိုငျးနယျမွေ ရဲစခနျးနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ရပျကှကျတာဝနျရှိသူမြားက ခိုကျရနျ ဖွဈပှားမှုမရှိစရေနျအတှကျ တားဆီးခဲ့ပွီး သောငျပွငျကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးထံ အကွောငျးကွားခဲ့သညျ။ ရေးမွို့နယျ၊ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမြိုးဝငျး က “လမိုငျးက ကောငျမလေးကိစ်စပေါ့။ ဟိုဘကျရှာနဲ့ ဒီဘကျရှာ စကားမြားကွ တာ။ စကားမြားတဲ့သူက သူတို့အဖျောတှကေို ချေါလာပွီးတော့ လာဝငျရမျးတဲ့ပုံစံ”ဟု ပွောသညျ။
ရေးမွို့နယျအတှငျးတှငျ ရေးမွို့နယျအပါအဝငျ လမိုငျးမွို့နယျနှငျ့ ခေါစာမွို့နယျဆိုပွီး မွို့နယျ ၃ ခုရှိသလို ရပျကြေး ၄၄ ခုရှိကာ လူဦးရေ ၂ သိနျး ၈ သောငျးခနျ့ရှိကွောငျး၊ လကျရှိရေးမွို့နယျတှငျ Quarantine ဝငျနသေူ ၁၀ဝ ကြျောခနျ့ရှိသညျဟု သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/19/220800.html
ကယားပွညျနယျ မှနရေပျပွနျ ကုမ်ပဏီဝနျထမျး အလုပျသမားမြား လုပျငနျးခှငျ ဝငျရောကျခွငျးမပွုမီ Community Based Facility Quarantine ဝငျရောကျရနျ ယနေ့( ဧပွီ ၁၉ ရကျ)တှငျ ကယားပွညျနယျအစိုးရရုံးက ကုမ်ပဏီမြားထံ အကွောငျးကွား စာ ပေးပို့ထားကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါစာတှငျ ပွညျနယျအတှငျး တညျဆောကျရေး လုပျငနျးမြားအပါအဝငျ လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျကွသော ကုမ်ပဏီ အသီးသီး ၏ ဝနျထမျးမြား ၊ အလုပျသမားမြားသညျ မဟာသင်ျကွနျ ကာလအတှငျး နရေပျအသီးသီးသို့ ပွနျလညျ ထှကျခှာ ခဲ့ကွပွီးနောကျ သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးခှငျမြားသို့ ပွနျလညျဝငျရောကျကွမညျဖွဈရာ COVID-19 ရောဂါ ကူးစကျပွနျ့နှံ့မှု မရှိရေး အတှကျ သတျမှတျနရောမြားတှငျ Community Based Facility Quarantine (၂၁)ရကျ ထားရှိဆောငျရှကျရမညျဖွဈ ကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။
ထို့ကွောငျ့ သတျမှတျနရောမြားတှငျ ၂၁ ရကျကွာ Community Based Facility Quarantine ထားရှိပွီး ကနျြးမာရေး စောငျ့ကွပျစဈဆေးမှု ခံယူရေးအတှကျ ခရိုငျ၊ မွို့နယျ COVID-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါ တုံ့ပွနျရေး ကျောမတီ အုပျခြုပျရေးဌာန၊ ပွညျသူ့ဆေးရုံနှငျ့ ကနျြးမာရေးဌာနမြားသို့ အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ သတငျးပို့ဆကျသှယျဆောငျရှကျ စရေေး အလေးထား ကွပျမတျဆောငျရှကျရနျ ကယားပွညျနယျအစိုးရ၏ အကွောငျးကွားစာတှငျပါရှိသညျ။ https://ne ws-eleven.com/article/169728
မှနျပွညျနယျ၊ သထုံမွို့နယျတှငျ KNU -ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး တပျမဟာ ၁ တာဝနျရှိသူမြားမှ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျရေးလုပျငနျးလုပျဆောငျမှုနှငျ့ပတျသကျပွီး ကရငျပွညျနယျ လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီးက ကနျ့ကှကျစာ မပေးပို့ သငျ့ဘဲ ရောဂါကူးစကျမှု ကာကှယျလုပျဆောငျခွငျးသညျ လူသားတိုငျးတာဝနျရှိသညျဟု KNU က ပွနျလညျ တုနျ့ပွနျ ပွောဆိုခဲ့ သညျ။
လုံခွုံရေးနှငျ့ နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ဗိုလျမှူးကွီးမြိုးမငျးနောငျ၏ ဧပွီလ ၁၇ ရကျနရေ့ကျစှဲပါ ကနျ့ကှကျစာအရ KNU တပျမဟာ ၁ တပျရငျး (၂) မှ တပျရငျးမှူးအဆငျ့ရှိသူ စောခဈြသူနှငျ့ ၎င်းငျးဦးစီးအငျအား ၇ ဦးသညျ COVID-19 ရောဂါနှငျ့ ပတျသကျပွီး ဖွတျ သနျးသှားလာသူမြားကို အပူခြိနျတိုငျးတာခွငျးနှငျ့ လိုအပျသော စဈဆေးမေးမွနျးမှုမြား ပွုလုပျလကျြရှိပွီး နယျမွအေတှငျး အခြိနျ ကနျ့သတျခရီးသှားလာစခွေငျးနှငျ့ လူစုလူဝေးဖွဈစနေိုငျမှုမြားကို မပွုလုပျကွရနျ အသိပေး ရညျညှနျးစာအပျေါ NCA အပဈရပျ စာခြုပျအတိုငျး နယျဘကျအုပျခြုပျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားတှငျ ဝငျရောကျစှကျဖကျမှုမြား မပွုလုပျရနျနှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြား အား ထိနျး သိမျးကွပျမတျပေးရနျ ဖျောပွထားသညျ။
နယျလုံ၏ ကနျ့ကှကျစာနှငျ့ပတျသကျ၍ KNU ဗဟိုမှ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး -၂ ပဒိုစောလှထှနျးက “ တဈမြိုးသားလုံးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ရောဂါလုံခွုံရေးအဆငျ့အနနေဲ့ သတျမှတျထားတယျ။ တကမ်ဘာလုံးက ရောဂါပိုးမပွနျ့အောငျ ကွိုးစားဆောငျရှကျနတေဲ့ အခြိနျမှာ အတူ တကှ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရမယျ့အစား အစိုးရက ခုလိုကနျ့ကှကျတာတော့ စိတျမကောငျးဖွဈရပါတယျ”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ အားကစားနှငျ့ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာန၏ ဧပွီလ ၁၉ ရကျနေ့ ည ၁၁:၁၅ အခြိနျ ထုတျပွနျခကျြအရ တိုငျးဒသေကွီး နှငျ့ ပွညျနယျမြားတှငျ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျခံထားရသူ ၁၁၁ ဦးရှိပွီးဖွဈသညျ။ Covid -19 ရော ဂါကာ ကှယျထိနျးခြုပျ ဆောငျရှကျနိုငျရေးအတှကျ အစိုးရနှငျ့ သကျဆိုငျရာ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြားကလညျး လိုကျနာရနျ စညျးကမျးခကျြမြား အသီးသီးထုတျပွနျထားမှုမြားလညျးရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e 1%80%b1%e1%80% 9b%e1%80%ac%e1%80%82%e1%80%ae1%80
သြှမျးပွညျ အရှပေို့ငျး တာခြီလိတျဆေးရုံတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျသညျ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး ၂၀ ကြျော တို့ သံသယလူနာ အဖွဈသတျမှတျခံရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ယမနျနေ့ တှငျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ အမှတျ ၉၆ သညျ ခှဲစိတျ အထူးကုဆရာဝနျ တဦးဖွဈပွီး၊ ထိုသူသညျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ အမှတျ ၄၇ နှငျ့ထိတှခေဲ့သူဖွဈကွောငျး ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန ထုတျပွနျခကျြ အရသိရသညျ။ “Case 96 နဲ့ ဆကျစပျတဲ့ သူတှဆေေးရုံမှာ အားလုံးပေါငျး ၂၁ ယောကျ ရှိတယျ။ ဆရာဝနျ က ၁၀ ယောကျပါတယျ။ လောလောဆယျ ဆေးရုံမှာ ဆရာဝနျ ၂ ယောကျပဲ လှတျတယျ။ လူနာကတော့ ဒီနေ့ ကြိုငျးတုံဆေးရုံကို ချေါသှားလိုကျပွီ” ဟု သြှမျးပွညျ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ လူမှုရေး ဝနျကွီး ဒေါကျတာ မြိုးထှနျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့သို့ ပွောသညျ။
လကျရှိမှာ တာခြီလိတျ ဆေးရုံအုပျကွီးအပါအဝငျ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး ၂၁ ဦး Quarantine ပွုလုပျထားသဖွငျ့ တာခြီလိတျ ဆေးရုံ အားဖွညျ့ရနျ အတှကျ မန်တလေး မှ သမားတျောတဦး နှငျ့ မဆေ့ေးအထူးကု ဆရာဝနျ တဦး၊ ကြိုငျးတုံ ပွညျသူ့ဆေးရုံ မှ သားဖှားမီးယပျ အထူးကု တဦး လာရောကျ အားဖွညျ့ထားကွောငျး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး ကဆိုသညျ။ တပျမတျော ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံးနှငျ့ ညှိနှိုငျးကာ တပျမတျောဆေးဘကျမှ အထူးကု ဆရာဝနျ ၂ ဦး၊ လကျထောကျဆရာဝနျ ၄ ဦး နှငျ့ သူနာပွု ၆ ဦး လာရောကျ အားဖွညျ့ပေးကွောငျး ဒေါကျတာမြိုးထှနျး ကဆကျလကျပွောသညျ။
လူနာ အမှတျ ၉၆ သညျ ရနျကုနျဆေးရုံတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျသညျ့ ခှဲစိတျဆရာဝနျကွီး တဦးဖွဈပွီး၊ သူ၏ အမြိုးသမီးသညျ့ တာခြီလိတျဆေးရုံက သားဖှားမီးယပျ ဆရာဝနျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ ထို့ကွောငျ့ လူနာ အမှတျ ၉၆ သညျ ဧပွီ ၆ ရကျ တှငျ မိသားစုနှငျ့ တှဆေုံ့ရနျ နှငျ့ တာခြီလိတျသို့ ရောကျရှိလာပွီး၊ ဧပွီ ၆ ရကျမှ ၁၀ ရကျထိ တာခြီလိတျ ဆေးရုံအုပျကွီးနှငျ့ အထူးကု ဆရာဝနျမြားနှငျ့ အလုပျကိစ်စ ဆှေးနှေးခဲ့သေးကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.shannews.org/archi ves/16195
မျောလမွိုငျမွို့၊ ဘိုကုနျးရပျကှကျ၊ သံလှငျဥယြာဉျဇုနျ (၅) ရှိ Bio Saving Level –3အဆငျ့ရှိ တီဘီရောဂါ ဓာတျခှဲခနျး အား COVID- 19 ကူးစကျကပျရောဂါပိုး စဈဆေးနိုငျသညျ့ ဓာတျခှဲခနျးအဖွဈ အသုံးပွုနိုငျရနျ လိုအပျသော ပစ်စညျးစာရငျးအား ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနထံ တငျပွထားကွောငျး ပွညျနယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနထံမှ သိရသညျ။
အဆိုပါ ဓာတျခှဲခနျးအား ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျမှ COVID-19 ကူးစကျကပျရောဂါပိုးအား စဈဆေးနိုငျရနျ လုပျဆောငျခငျြ ကွောငျး၊ လိုအပျမညျ့ ပစ်စညျးစာရငျးကိုပွုစုပွီး ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနထံ တငျပွတောငျးခံထားကွောငျး၊ ပစ်စညျး မြား ပေးပို့ မညျဆိုပါကလညျး အနညျးဆုံး တဈလခနျ့ ကွာဦးမညျဖွဈကွောငျး၊ ပစ်စညျးမြားရရှိခဲ့ပါကလညျး ဓာတျခှဲစမျးသပျမညျ့ ဝနျထမျးလိုအပျခကျြ အခကျအခဲရှိဦးမညျဖွဈကွောငျး မှနျပွညျနယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဒေါကျတာ ထှနျးအောငျကွညျက ပွောကွားသညျ။ “ရခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့။ အခုရနျကုနျမှာရှိနတေဲ့ NHL ကဘဲ ရသေးတာ လေ။ မန်တလေးမှာရှိတဲ့ Lab တောငျမရသေးဘူး။ မန်တလေးမှာလညျးလုပျဖို့ ကွိုးစားနတေယျလို့သိရပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့မှာက တီဘီရောဂါအတှကျ လုပျထားတဲ့ Lab ရှိနတေော့ ဒီ Coronavirus စဈနိုငျအောငျ ပစ်စညျးတှေ ထပျထညျ့ရမယျဆိုတာက လညျး စာရငျးတှေ ပွုစုပွီး တငျပွထားတုနျးရှိပါတယျ။ ဖွဈလာမယျ။ မဖွဈလာဘူးဆိုတာကိုတော့ ဘာမှမပွောလိုသေးပါဘူး” ဟု ဒေါကျတာ ထှနျးအောငျကွညျက ပွောကွားသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီး လာရောကျခဲ့စဉျက လကျရှိဓာတျခှဲခနျးထဲရှိ ပစ်စညျးမြားနှငျ့ COVID- 19 ကူးစကျရောဂါပိုး စဈဆေးနိုငျရနျအတှကျ လိုအပျသညျ့ ပစ်စညျးစာရငျးပွုစုပွီး ပွညျထောငျစုဝနျကွီးထံ ပွနျလညျတငျပွပေးရနျ လမျးညှနျကွားသှား သညျ့အတှကျ ဧပွီလ (၁၆) ရကျက ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျကိုယျတိုငျလာပွီး မျောလမွိုငျဆေးရုံအုပျကွီး၊ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြား အားလုံးအစညျးအဝေးချေါယူကာ ဓါတျခှဲခနျးအတှကျ လိုအပျသညျ့ပစ်စညျးစာရငျးကို ပွညျထောငျစု ကို ပွနျတငျပွထားပါကွောငျး ဒေါကျတာထှနျးဦးက ဆိုသညျ။
လကျရှိတှငျ မှနျပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျအသီးသီးမှ စောငျ့ကွညျ့လူနာ (PUI) မြား နှငျ့ Quarantine မြား၌ စောငျ့ကွညျ့ခံ နသေူမြား၏ Nasopharyngeal Swab နှငျ့ Oropharyngeal Swab နမူနာအား ရယူ၍ ပွညျနယျပွညျသူ့ကနျြးမာရေး ဦးစီးဌာနရုံးမှတဆငျ့ ရနျကုနျမွို့ရှိ အမြိုးသားဓာတျခှဲခနျးဌာနသို့ နစေ့ဉျ ပေးပို့စဈဆေးလြှကျရှိ ကွောငျး သိရသညျ။https://n ews-eleven.com/article/169843
ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလဆနျးပိုငျးကစလို့ ဆနျရိက်ခာပွတျလပျနတေဲ့ ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝမွို့ပျေါကို မနကေ့ ဆနျအိတျ ၈၀ဝ ကြျော ပထမဆုံး ရောကျရှိသှားပွီး ဒီပမာဏဟာမွို့ပျေါက လူဦးရေ တဈသောငျးကြျောအတှကျ တဈပတျစာ ဖူလုံသှားပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာလညျး သုံးလစာလောကျ ဆနျဆကျလကျထောကျပံ့ပေးနိုငျရေး စီစဉျသှားမယျလို့ တပျမတျောနဲ့ အစိုးရ တာဝနျ ရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။
ဆကျသှယျရေး အခကျအခဲကွောငျ့ ဆနျတှကေို ခှဲဝပေေးတဲ့ အသေးစိတျအခွအေနကေိုတော့ မသိရသေးဘူးလို့ ဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့၊ လူမှုဝနျထမျးကယျဆယျရေးနဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး ဝနျကွီးဌာနက ပလကျဝ မွို့နယျအတှကျ သုံးလစာ ထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ ဆနျအိတျ ၆၀ဝဝ ခနျ့ စဈတှမွေို့မှာ ရှိနပွေီး၊ အလှူရှငျတှေ လှူဒါနျးထားတဲ့ ဆနျအိတျ ၃၃၀ဝ လောကျ ဆမီးမွို့မှာ ရှိနပေါတယျ။ တိုကျပှဲတှနေဲ့ နယျမွလေုံခွုံရေး အခွအေနအေရ ပလကျဝမွို့ပျေါကို ဆနျအိတျတှေ လှယျလငျ့တကူ မပို့နိုငျဘဲ ဖွဈနတောပါ။ လတျတလောမှာ ဆမီးနဲ့ ပလကျဝမွို့ကွားမှာ တိုကျပှဲတှရှေိနပွေီး ကားလမျးကွောငျး ရှငျးမယျဆိုရငျတော့ ဆနျတှေ ဆကျပို့နိုငျမှာပါ။
တပျမတျောက လုံခွုံရေးပေးလို့ ပထမဆုံးအကွိမျပို့တဲ့ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ကား ၁၁ စီးနဲ့ ဆနျအိတျ ၈၅၀ တငျပို့ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကားတဈစီးကပကျြလို့ ဆနျအိတျ ၅၀ ဆမီးမှာ ကနျြခဲ့ပါတယျ။ တပျမတျောက လမျးလုံခွုံရေးရယူပွီး ပို့ဆောငျတာ ဖွဈကွောငျးနဲ့ ဆကျလကျပို့မယျ့ အစီအစဉျတှရှေိတယျလို့ တပျမတျော သတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့က ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက RFA ကို ပွောပါတယျ။ အခုလို ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုး ပြံ့နှံ့နခြေိနျမှာ တိုကျပှဲတှကေို ရပျဆိုငျးထားဖို့ အရပျဖကျ အဖှဲ့တှေ၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေ တိုကျတှနျးတောငျးဆိုမှုတှရှေိနပေါတယျ။ https://www.rfa.org/ burmese/news/paletwarefugeesdonate04202020042055.html
သြှမျးပွညျအတှငျး COVID-19 ရောဂါ စဈဆေးနိုငျရနျအတှကျ စကျ ၂ လုံး မကွာမီ ရောကျရှိလာမညျ ဟု သြှမျးပွညျ အစိုးရ အဖှဲ့ မှစုံစမျးသိရသညျ။ အဆိုပါ စကျ ၂ လုံးကို လှူဒါနျးမညျ့ အလှူရှငျရှိထားပွီးဖွဈကွောငျး၊ သြှမျးပွညျအတှငျးရှိ ဆေးရုံကွီး ၂ ခု ဖွဈသညျ့ သြှမျးမွောကျ လားရှိုးပွညျသူ့ဆေးရုံ နှငျ့ သြှမျးတောငျ တောငျကွီးမွို့ရှိ စဝျစံထှနျးဆေးရုံတှငျ ထားရှိသှားမညျ ဟု သြှမျးပွညျနယျအစိုးရပွောခှငျ့ရ စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီး ဦးစိုးညှနျ့လှငျ ကပွောသညျ။ “သြှမျးပွညျနယျအတှကျ သတငျး ကောငျးတဈခုကတော့ COVID-19 နဲ့ပတျသကျပွီးတော့ စမျးသပျရေးစကျ ၂ စုံ လှူဒါနျးဖို့ ကမျးလှမျးထားပါတယျ။ တဈစုံကို သိနျး ၄၀ဝဝ ပတျဝနျးကငျြ ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီစကျတှကေို ကနြျောတို့ သြှမျးပွညျကို လာရောကျလှူဒါနျးထားပါတယျ။”ဟု ဦးစိုးညှနျ့လှငျ ကပွောသညျ။
ငါးပါးသီလ ဘုရားစာသငျကြောငျးသားဟောငျးမြားမှ လားရှိုးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးအတှကျ COVID-19 ဓါတျခှဲစမျးသပျသညျ့စကျ ၁ စုံ လှူဒါနျးမညျဖွဈပွီး ၊မဟာယန ယူနနျ ဗုဒ်ဓဘာသာ ရနျပုံငှေ ရှာဖှရေေးကျောမတီမှလညျး တောငျကွီး စဝျစံထှနျးဆေးရုံ အတှကျ အဆိုပါစကျမြိုး ၁ စုံ လှူဒါနျး သှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ “လှူဒါနျးတဲ့ခါမှာ လကျခံဖို့ မခံဖို့က ကနြျောတို့က ပွညျထောငျစု ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကို လမျးညှနျမှု ခံယူထားပွီး ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကနေ ခှငျ့ပွုလိုကျတာနဲ့ တဈပွိုငျတညျး ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ယူနနျကနေ မန်တလေး ကိုရောကျမယျလို့ ပွောပါတယျ”ဟု ဦးစိုးညှနျ့လှငျ ကပွောသညျ။
“ဓာတျခှဲနမူနာတှကေို ကမ်ဘောဇလကွေောငျးလိုငျးနဲ့ ပို့ကွတယျ။ လကွေောငျးက အခုလ ဆိုရငျ ၂၃ ရကျနဲ့ ၂၉ ရကျပဲ ပွေးဆှဲမယျ ဆိုတော့ ကိုဗဈ ဓာတျခှဲနမူနာတှေ ဘယျလို ပို့ကွမယျဆိုတာတော့ မသိတော့ဘူး”ဟု တာခြီလိတျမွို့ရှိ ကမ်ဘောဇ လကွေောငျး လိုငျး အရောငျးကိုယျစားလှယျ တဦးက ပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16204
ရနျကုနျကနေ စဈတှလေဆေိပျကို အဲကမ်ဘောဇလကွေောငျးလိုငျးနဲ့ ဧပွီ ၁၉ ရကျနေ့ မနကေ့ ရောကျရှိလာတဲ့ ခရီးသညျ ၆၅ ဦး မှာ နှဈဦးကိုသာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျရေးအတှကျ သီးသနျ့နထေိုငျဖို့ ပွညျနယျအစိုးရက ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ထား ပါတယျ။ ဒသေခံတခြို့ကတော့ နှဈဦးတညျးကို စောငျ့ကွညျ့ရုံနဲ့ လုံလောကျမှု မရှိဘူးလို့ ယူဆပါတယျ။
အဲကမ်ဘောဇ လကွေောငျးနဲ့ လိုကျပါလာတဲ့ ၆၅ ဦးမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျပွနျ့ပှားမှုမြားပွားတဲ့ ရနျကုနျ အငျးစိနျမွို့နယျက နှဈဦး ပါဝငျပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးကိုသာ ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ထားပွီး ကနျြတဲ့သူတှကေို နအေိမျမှာ ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ဖို့ အစိုးရက ညှနျကွားထားတယျလို့ စဈတှမွေို့ အရပျဖကျအဖှဲ့က ကိုထှနျးလငျးအောငျက ပွောပါတယျ။
“စဈတှရေယျ၊ ပုဏ်ဍားကြှနျးရယျ၊ ပေါကျတောရယျ သုံးခု ပုဏ်ဍားကြှနျးကိုတော့ ကားနဲ့ပို့တယျ။ ပေါကျတော မနကေ့ တဈခါ တညျးပို့တယျ၊ အစိုးရအစီအစဉျ နဲ့ ကားနဲ့ပို့တယျ။ စဈတှကေ အငျးစိနျကလာတဲ့ အမြိုးသမီး နှဈယောကျကိုတော့ ကှာရနျတငျး ထားတယျ။ ကနျြတဲ့သူတှကေိုတော့ ဟုမျးကှာရနျတငျးထားဖို့ ညှနျကွားထားတယျ”ဧပွီ ၁၉ ရကျနေ့ မနကေ့ ခရီးသညျတငျ လယောဉျ တဈစီးနဲ့ ကုနျပစ်စညျးတှေ တငျဆောငျလာတဲ့ တပျမတျော လယောဉျ နှဈစီး ဆငျးသကျခဲ့ပါတယျ။ လဆေိပျမှာ အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့တှနေဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေ အဓိက စဈဆေးကွတာလို့ စဈတှလေဆေိပျ တာဝနျရှိသူ ဦးကြျောစိုးက ပွောပါတယျ။
စဈတှမွေို့နယျမှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈနဲ့ပတျသကျပွီး ကူညီဆောငျရှကျနတေဲ့ အရပျဖကျအဖှဲ့က ကိုထှနျးလငျးအောငျက အငျးစိနျ က နှဈဦးထဲကို ကနျ့သတျစောငျ့ကွညျ့ရုံနဲ့ လုံလောကျမှု မရှိနိုငျဘူးလို့ ထောကျပွပါတယျ။ “နှဈယောကျတညျးထားတာတော့ ဆပျေ့ဖွဈမယျမထငျဘူး၊ လယောဉျပျေါမှာလညျး တဈစီးတညျးအတူတူစီးလာခဲ့ပွီးပွီ တဈစီးလုံးကို တူတူပဲ ကှာရနျတငျး ထားစေ ခငျြတယျ”စဈတှမွေို့နယျမှာ သံသယ လူနာတဈဦးရှိပွီး ဆေးစဈဖို့ ရနျကုနျကို ပေးပို့ထားပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈပိုး စောငျ့ကွညျလူနာ စုစုပေါငျး ၃၆ ဦး ရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ https://www.rfa.org/burme se/ne ws/twopassengersarrivedin sittwequarantine-04202020052728.html
၂၇။ လူနာအမှတျစဉျ ၈၂ ဖွငျ့ဆကျစပျသော ကခငျြပွညျနယျမှ စောငျ့ကွညျ့လူနာ ၈ ဦးအနကျ ၄ ဦးကို စဈဆေးရာ ပိုးမ တှေ့
Covid-19 ပိုးတှရှေိ့ လူနာအမှတျစဉျ ၈၂ နှငျ့ ထိစပျခဲ့ကွသညျ့ ကခငျြပွညျနယျမှ စောငျ့ကွညျ့ခံထားသူ ၈ဦးအနကျ ၄ ဦးအား ဓါတျခှဲစဈဆေးပွီးဖွဈရာ ပိုးမတှကွေ့ောငျး ကခငျြပွညျနယျကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသညျ။ လူနာအမှတျ ၈၂ ဖွငျ့ လယောဉျ အတူးစီးခဲ့ကွသူမြားသညျ မွဈကွီးနားမွို့တှငျ ၅ ဦး၊ ဝိုငျးမျောမွို့နယျတှငျ ၁ဦး၊ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ ၂ ဦး စုစုပေါငျး ၈ ဦးအနကျ ၄ ဦးအား စဈဆေးပွီးဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနမှ ကနျြးမာရေးမှူး ဒေါကျတာနျောရှဲယျတာ ပွောသညျ။
“အဲဒီ Case လူနာအမှတျ ၈၂ နဲ့ထိစပျခဲ့တာ ၈ ယောကျရှိတဲ့ထဲမှာ ၄ ယောကျကိုတော့ စဈပွီးပွီ။ သင်ျကွနျကာလအတှငျး စဈဆေးပွီးဖွဈတယျ။ အားလုံးက Nagative ဖွဈတယျ။ ကနျြတဲ့ ၄ ယောကျကိုတော့ သနျဘကျခါလောကျပို့ဖို့ စီစဉျနပေါ တယျ။” ဟု ကနျြးမာရေးမှူး ဒေါကျတာနျောရှဲယျတာ ပွောသညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ လကျရှိ Home Quarantine ၁၉၁၂ ဦး၊ Facility Quarantine ၂၇၆၇ ဦးရှိပွီး Quarantine ထားရှိသူ အားလုံးသညျ ၄၆၈၈ ဦးရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာဌာနမှ သိရသညျ။
“ခုလကွေောငျးလိုငျးတှကေ ပိတျထားတော့ ကမြတို့အနနေဲ့ ဓါတျခှဲဖို့ ပို့တဲ့နရောမှာ အခကျခဲတော့ရှိတယျ။ အခြိနျမှီ ၄၈ နာရီ ရောကျမှ တိကတြဲ့အဖွကေရမှာ။ အဲတော့ ဒီကနဘေယျခြိနျထှကျမယျ ဘယျနရောမှာအိပျမယျ ရနျကုနျကိုဘယျခြိနျရောကျမယျ ဆိုတာကအစ အကုနျလုံးကအခြိနျကိုကျလုပျရတာပေါ့။ ကားဆရာကလညျး အိပျငိုကျလို့မရဘူး။ အဲမှာကိုယျ့ရဲ့ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးက ပါရသေးတယျ။ အအေးလမျးစနဈနဲ့ သယျရတယျဆိုတော့ အအေးလမျးမပွတျအောငျ ပညာရှိတှလေညျး လိုကျပေး ရတယျ။”ဟု ကနျြးမာရေးမှူး ဒေါကျတာနျောရှဲယျတာ ပွောသညျ။ ကခငျြပွညျနယျတှငျ ပွညျတျောပွနျမြားကိုထားရှိရနျ ပွငျဆငျ ထားသညျ့ FQ နရော စုစုပေါငျး ၃၅၁ အနကျ နရော ၂၅၂ တှငျ သုံးနပွေီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.ka chinnews. com/2020/04/20/%e1%80%9c%e1%80%b0%e180%94%e1%8%ac%e1%
တပျမတျောက ဖမျးဆီးသှားသညျ့ ရခိုငျးပွညျနယျ၊ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျမှ ကြောကျဆိပျရှာသား ၄၀ ခနျ့ အနကျမှ ၃၃ ဦး ပွနျ လှတျလာပွီဖွဈကွောငျး မိသားစုဝငျမြားထံမှ စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ကြောကျဆိပျကြေးရှာသို့ ဧပွီ ၁၉ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးက တပျမ တျောသားမြား ဝငျရောကျလာကာ ကြေးရှာသားမြားကို အုပျခြုပျရေးမှူးနအေိမျ၌ စုဆောငျးပွီးအပွနျတှငျ ဖမျဆီး ချေါဆောငျသှားခွငျးဖွဈပွီး ထိုအထဲမှ တခြို့ကို ပွနျလှတျပေးလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ ကြောကျဆိပျရှာသား ဦးဘရှေ က “ကနြျော့သား ၂ ယောကျ ဒီနေ့ ညနပေိုငျးမှာ ပွနျလှတျလာပါပွီ၊ ပွနျလှတျလာတာ အားလုံး ၃၃ ပါ၊ ၅ ယောကျက ပွနျ မလှတျလာသေးဘူး” ဟု ဧရာဝတီသို့ပွောသညျ။
အဆိုပါ ပွနျလှတျလာသူမြားထဲတှငျ ရိုကျနှကျခံရမှုရှိသညျ့အတှကျ တခြို့ ဒဏျရာရရှိမှုရှိကွောငျးလညျး မိသားစုဝငျမြားက ပွောကွသညျ။ ဦးဘရှကေ “မနကေ့ မနကျ ၇ နာရီလောကျမှာ တပျက ရှာထဲကို ဝငျပွီးတော့ ခငျဗြားတို့ကို ပွောစရာတှေ ရှိတယျဆိုပွီး အုပျခြုပျရေးမှူးအိမျမှာ စုပါတယျ။ အသကျ ၄၀ လူတှကေို တဖကျ စုတယျ။ အသကျ၂၀ ကြျော ၄၀ ကွား လူတှေ ကို တဖကျ စုပါတယျ။ သူတို့ နလေ့ယျ ၁ နာရီလောကျ ပွနျထှကျသှားတဲ့အခါ ရှာကလူငယျ ၃၉ ဦးကို ကွိုးတုတျပွီး ချေါသှားပါတယျ။ အဲဒီအထဲမှာ ကနြျော့သား၂ ယောကျလညျး ပါသှားတယျ”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
တပျမတျော သတငျးပွနျကွားရေး အဖှဲ့မှ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ကြောကျဆိပျကြေးရှာသားမြားကို ဖမျးဆီးထားသညျမှာ မှနျကနျပွီး၊ ရက်ခိုငျစဈတပျ (AA) အဖှဲ့နှငျ့ ပတျသကျ ဆကျနှယျသညျ့ မသင်ျကာဖှယျရာမြား တှရှေိ့ရသညျ့အတှကျ ဆကျစပျ ဖျောထုတျနခွေငျးသာဖွဈပွီး ဥပဒအေတိုငျးဆကျလကျဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး ၃၃ ဦးကို ပွနျမလှတျပေးမီက ဧရာဝတီသို့ ပွောဆိုသညျ။
ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကြောကျဆိပျကြေးရှာအတှငျး လကျနကျကွီး ကညျြဆနျ ကရြောကျပေါကျကှဲသညျ့ ဖွဈစဉျ နှငျ့ ပတျသကျ ပွီး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) က ဧပွီလ ၁၇ ရကျ ရကျစှဲဖွငျ့ သဘောထား ကွညောခကျြတစောငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ အဆိုပါ ကွညော ခကျြတှငျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကြောကျဆိပျကြေးရှာအား တိုကျပှဲဖွဈပှားခွငျးမရှိဘဲ မွနျမာ့တပျမတျောမှ လကျနကျ ကွီးမြားဖွငျ့ ပဈခတျခဲ့မှုကွောငျ့ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား သဆေုံးခွငျး၊ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခွငျး၊ နရေပျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးသှားရခွငျး မြားအား စိစဈအရေးယူပေးရနျ မွနျမာနိုငျငံ လူ့အခှငျ့ရေး ကျောမရှငျ အပါအဝငျ သကျဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျး အားလုံးအား အလေးအနကျ တောငျးဆိုကွောငျး ရေးသား ပါရှိသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/2
ကရငျပွညျနယျတှငျ Covid-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ လတျတလော ဟိုတယျနှငျ့တညျးခိုခနျး ၇၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ ခတ်ေတပိတျထား နရေဆဲဖွဈသညျ့အတှကျ ကပျရောဂါကာလရှညျကွာပါက ပွညျနယျအတှငျး ဟိုတယျနှငျ့ တညျးခိုခနျး လုပျငနျးမြား အခကျအခဲ ဖွဈပျေါလာနိုငျကွောငျး ပွညျနယျဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျး တာဝနျရှိသူမြားက ပွောဆိုသညျ။ ကမ်ဘာအနှံ့ဖွဈပှားနသေညျ့
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ (Covid-19) ကပျရောဂါကို မွနျမာနိုငျငံတှငျ စတငျတှရှေိ့ရပွီးနောကျ ၎င်းငျးနှငျ့ဆကျစပျပွီး ပွညျနယျ အတှငျးရှိ ဟိုတယျ၊ တညျးခိုခနျးမြားမှာ ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလကုနျမှ စတငျကာ ရောဂါကွိုတငျကာကှယျသညျ့အနဖွေငျ့ ယခုလို ဟိုတယျ၊ တညျးခိုခနျးမြား ပိတျထားလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု လညျးသိရသညျ။
ကရငျပွညျနယျ ဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားအသငျးဥက်ကဋ်ဌ ဦးအောငျသနျးက “ဟိုတယျတျောတျောမြားမြားက ဘဏျမှာ ဘဏျခြေး ငှယေူထားပွီး လညျပတျနတောပေါ့ ။ ဘဏျအတိုးကိုလညျးပေးရတဲ့အကနျ့တှရှေိတယျ။ ဧညျ့သညျမရှိတော့ ဝငျငှမေရှိတော့ ဘူး။ ဘဏျအတိုးနှုနျးက အိတျစိုကျပွီးပေးရတဲ့အနအေထားရှိတယျ။ ဒီ တဈလနှဈလအတှငျးမှာ ဒီအတိုငျးဆကျပိတျရပွီး တိုးတကျမှုမ ရှိလာရငျ ဘယျလိုလုပျငနျးတှပွေောငျး လုပျရ မလဲ နညျးနညျးရှုတျထှေးမှုတှရှေိလာတယျ။ ဝနျထမျးတှအေတှကျက လုပျငနျးရှငျ တှကေ တောငျ့ပွီးပေးထားတယျ။ ဒီထကျကွာရငျတော့ လုပျငနျးရှငျဘကျက ပေးနိုငျမှာမဟုတျတော့ဘူး”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွော သညျ။
ကရငျပွညျနယျတှငျ ဟိုတယျနှငျ့ တညျးခိုခနျးပေါငျး ၆၀ ကြျောရှိသညျဟု သိရပွီး အမြားစုမှာ ခတ်ေတပိတျထားသျောလညျး ဖှငျ့လှဈထားဆဲဖွဈသညျ့ ဟိုတယျအခြို့တှငျ ဧညျ့သညျဝငျရောကျတညျးခိုမှုမရှိသညျ့အတှကျ ကာလကွာရှညျမညျဆိုပါက ဝနျထမျး မြားအတှကျပါ ခကျခဲလာနိုငျကွောငျးလညျး ဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြားက သုံးသပျပွောဆိုသညျ။
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာသညျနှငျ့အမြှ ကရငျပွညျနယျတှငျ ခရီးသှားဧညျ့သညျဝငျရောကျမှု တဈနှဈထကျ တဈနှဈ မြားပွားလာမှု ကွောငျ့ နှဈစဉျမတျလနှငျ့ ဧပွီလမြားမှာ ခရီးသှားဧညျ့သညျ အဝငျအထှကျအမြားဆုံး လ ဖွဈသလို ဟိုတယျလညျပတျမှု အကောငျးဆုံးလမြား ဖွဈသညျဟုလညျး ဟိုတယျလုပျငနျးရှငျမြား၏ ပွောပွခကျြအရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/ 2020/0 4/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%97%e1%80%85%e1%80